Maxaa ku cusub Gnome 3.5.2 ama in ka badan oo isku mid ah? | Laga soo bilaabo Linux
Maxaa ku cusub Gnome 3.5.2 ama in ka badan oo isku mid ah?
In kasta oo aanan isticmaalin Gnome, oo aad uga yar Qolofta Gnome, Waxaan u maleynayaa inay mudan tahay in la xuso qaar ka mid ah isbeddelada ugu habboon ee la imaan doona nooca 3.5.2, in si caddaalad ah oo dhan, ka dib socdaalka aad ku dhex arki karto xidhiidhkan, waxba igama yaabin.
Kama hadli doono dhammaan isbeddelada ama wararka, maadaama xiriirkii hore wax waliba si wanaagsan u faahfaahsan yihiin, waxaan kaliya ka faaloon doonaa waxyaabo aan ka fikiro iyaga, dhaleeceyn ahaan, aniga oo ku saleynaya fekerkeyga shaqsiyeed. Si ballaaran markaan uhadalno oo aanan faahfaahin badan helin, waxaan u maleynayaa inay ragga ka yimaadeen Gnome Waa inay kireystaan ​​istiraatiijiyad wanaagsan oo Gtk ah, astaan ​​iyo kooxda naqshadeynta mawduuca.
Haddii aad eegto sawirka kore, waxaan u maleynayaa in dad badani igu raaci karaan aniga, in astaamaha Gnome iyagu waxba kuma laha xiriirka ka Shell, si kasta oo aad u eegto iyaga, wali waxay umuuqdaan kuwo duugoobay, duugoobay. Waxay isticmaali karaan wejiga, ma aqaano, waxaa laga yaabaa inuu isbedel ku yimaado midabka midabka. Astaamaha kujira guddiga, aagga kore ee midig, waa kala fog yihiin oo midka ugu liita ee tufaaxa isticmaalaha ma noqon karo, in kasta oo ay leedahay dhibic u roon, haddana waxaa ku jira ikhtiyaarka ah Dami ugu talagal
Nautilus magacaaga u badal Faylasha, kadis ah isla magaca wiilasha Dugsiga hoose waxay siiyeen tiisii Maamulaha faylka, oo hadda waxaa ku jira liiska macnaha guud ee xulashada ku xirnaanta server. Mid kale oo magaciisa badala ayaa ah Totem, oo hadda loo yaqaan videoslaakiin taasi wali wey u xun tahay sidii caadiga ahayd.
Wax cusub laguma daro qaabeynta Nidaamka, iyo sida muuqata horumariyeyaasha Gnome kuma talo jiraan inay ku daraan Gnome-Tweak-Tools barnaamij ahaan asal ahaan: QALAD !!!! Goorma ayey taas ogaan doonaan Qolofta Gnome waa wax aan macquul ahayn, haddii eraygan jiro?
In kasta oo ay yiraahdaan Evolution wuxuu yeelan doonaa xoogaa isbeddello ah, sida adeegsiga Qalabka mareegaha halkii gtkhtml, Kaliya markaan arko isdhexgalka waxay iga dhigeysaa inaan doonayo inaan tirtiro oo aan ka tirtiro goobaha keydka. Waxaa laga yaabaa inay tahay wixii aan horay u soo sheegay, in arrinta Gtk (Adwayta) iyo astaanta loo dejiyay waxay u baahan tahay waji deg deg ah, laakiin dareenka ah inay tahay "culays" codsi maskaxdayda lagama saari maayo.
Faahfaahin xiiso leh. Miyaad aragtay Nuqul ka mid ah Tifaftiraha Dconf? Si hadhow aysan taas u dhihin Canonical waxba ku darsan maayo Gnome hehehe. Ugu dambeyntiina, horeyba isticmaaleyaasha Gnome waxay helayaan macmiil SQLite.
Ha u arkin maadaama aan wax ka haysto GnomeWaa wax fudud in dhammaan waqtiyadan horumarineed, miyay runti wax ku darsadeen xiisaha Deegaanka Desktop? Hagaag, waxaa laga yaabaa inay sifaynayaan faahfaahinta waxqabadka kale iyo waxyaabaha la midka ah, laakiin ugu yaraan qaybta muuqaalka ah weli wax badan oo la doonayo ayaa looga tagayaa.
Dhawaan ayaan sheegay mar labaadna waan ku celiyey, Qolofta Gnome Uma maleynayo inay ku habboon tahay kombiyuutarka. Isticmaalaha kumbuyuutarka yaqaan oo jecel inuu adeegsado tuuryo wax dhib ah ma lahan, laakiin qof caadi ah, oo kaliya u adeegsada kombiyuutarka waxyaabo fudud, uma maleynayo inay ku raaxeysan karaan isdhexgalka hadda jira. Kaliya badalashada barnaamijyadu waa dhib.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad gaadhay dhammaadka maqaalka oo aad u malaynayso inaan ahay dameer aan sabab lahayn waxa uu qorayo ama aasaaska, waxaad kala soo bixi kartaa a Gnome LiveCD oo cadee, si markaa aad aniga iila fikirto anshaxyada adduunka oo dhan oo aan khaldanahay. In kasta oo tani ay tahay aragtidayda oo waa sida aan u arko. Gnome 3.5.2 Waa badan tahay isku mid.
Dalxiis iyo Sawirro laga soo qaaday: @ worldofgnome.org
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Maxaa ku cusub Gnome 3.5.2 ama in ka badan oo isku mid ah?
133 faallooyin, ka tag taada
Waxyaabaha xiisaha leh ee aan arkay ee ka dhacay balooggan "dhowr jeer" ... waxaa soo baxday in jaantus loo abuuray dood kasta ... arrinta waa la iska indhatiray ka dibna waxaa jira qoraal cusub oo huruud ah oo leh aasaas xun oo ku saabsan arrintii hore. Ama waa dood la'aan ama si fudud in loo abuuro xamaasad in booqashooyin badan la yeesho. Tanina waxay ku soo baxday si fudud sababtoo ah Linus wuxuu dhaleeceeyaa Shell iyo Linus marka laga reebo inay yihiin haybad iyo ixtiraam kasta oo uu u qalmo, isagu ma aha kan sameeya dhaliil muuqaal ah.
elav, kani maahan saaxiib dhaliil ee iga raali ahaw inaan kuu sheego, kani waa xanta, maahan sababta oo ah "waa fikirkaaga shakhsiga ah" macnaheedu waa inaysan taasi sii soconaynin, - raggu waa inay qaadaan mas'uuliyadda hadalkooda.
Ma lihid aasaas dhab ah oo aad ku tidhaahdo maxay yihiin cilladaha ku jira Gnome Shell dabcan wayna kaa maqan yihiin inaad tiraahdo waa maxay wanaaggeeda.
Maxaadse ugu malaynaysaa inaan ogahay? fudud, waxaad la hadlaysaa qof, kaa weyn, oo khibrad badan leh oo salka ku haya suunkiisa laba shahaado jaamacadeed oo la xidhiidha sawirka, midkoodna waa Bachelor of Arts, sheeg Media Mixed ... waxaan kuu sheegi karaa dood taas oo waa ciladaheeda iyo wanaagiisa.
Anigu waxaan ahay qof aftahan ah oo ku saabsan dhawaaqa gardarrada ah ee inta badan bar-kulannada iyo baloogyada ay kugu jawaabaan, taasi miyay tahay sababta oo ah waxaan nahay Laatiin Ameerika ma baran doonno? Miyaynu sii wadaynaa inaan noqono dunida 3aad iyo kuwa yar, fikirka? Waa ku filan tahay, waa in dadka aan aqoon u lahayn mowduuc aysan faallo ka bixin karin iyo haddii ay ka hadlayaan, ixtiraam.
Hadda, haddii aad sii wadaysid qaadashada dabeecaddaas carruurnimo oo aad sii wadayso inaad iska indhatirto, soo dhowow. Dadka i jecel, i xushmeeya, oo i qushuuca waxay si sax ah u sameeyaan sababtoo ah waxaan runta u sheegaa, inaanan la socon socodka.
Waxyaabaha xiisaha leh ee aan arkay ee ka dhacay balooggan "dhowr jeer"… waxaa soo baxday in shax lagu abuuray dood kasta… mawduuca waa la iska indhatirayaa ka dibna waxaa jira qoraal cusub oo huruud ah oo leh aasaas xun oo ku saabsan mowduucii hore. Ama waa muran la'aan ama si fudud u abuurta hubbub inaad yeelato booqashooyin badan. Tanina waxay ku soo baxday si fudud sababtoo ah Linus wuxuu dhaleeceeyay Shell iyo Linus marka laga reebo inay yihiin haybad iyo ixtiraam kasta oo uu u qalmo, isagu ma aha kan sameeya dhaliil muuqaal ah.
Arrintaan wax shaqo ah kuma lahan Linus Torvalds, Waxaan si fudud u helay Dalxiiskii xiriirka ee aan dhigay, oo waxaan doonayay inaan ra'yigayga ka dhiibo "isbeddelada la filayo" ee ay ka mid tahay Gnome 3.5.2. Lahaanshaha booqashooyin badan ayaa laxiriira haddii midkastoo kamid ah, gudaha Laga soo bilaabo Linux lacag ayaa la gelayaa, oo i aamin, xaalku maahan. Waxaan qoray maqaalkan oo keliya, si aan u muujiyo shuruudaha iyo dabcan, anigoo og in dad badani aysan raalli ka ahayn.
elav, kani maahan saaxiib dhaliil ee iga raali ahaw inaan kuu sheego, kani waa xan, maahan maxaa yeelay "waa fikirkaaga shaqsiyeed" macnaheedu waa inaysan muhiimad dambe lahayn, - raggu waa inay qaadaan mas'uuliyadda ereyadooda.-
Waan ku raacsanahay fikradaha shaqsiga ah, laakiin kuma heshiinno "xanta". Sababtoo ah aniga "xanta" waa hadalkaas xun ee lagu sameeyo dhabarka "wax ama qof" dhab ahaan mana u maleynayo inay sidaas tahay.
Kama fileynin inaan siiyo saaxiib aasaasi ah oo dhab ah, waa fikirkeyga. Waan isticmaalay Qolofta Gnome, oo kamaan hadlin wax aanan horey ugu arkin nuskhadii hore. Akhlaaqda? Aniga aad u yar, runtii, waxaan kuu sheegi karaa:
- Farriimaha isku dhafan ee farriimaha hoose.
Horeba, waan ka dhammaaday wanaaggii aan ka helay Gnome Shell.
Hagaag, waan ixtiraamayaa taas, maxaa yeelay laga soo bilaabo da'da yar waxay i breen inaan ixtiraamo dadka waayeelka ah si sax ah sababtoo ah heerka khibradooda, markaa markasta oo aad rabto (haddii aad waqti leedahay ama aad rabto) waxaad uga tagi kartaa isla faallooyinka, sida maqaal ku yaal boggan , aragtidaada oo leh doodo sax ah.
Durba qaybtan dambe ayaan nafteyda ku waayey, ma garanayo waxay waxaas oo dhami ku leeyihiin mawduuca aan wax ka qabanayno. Si kastaba ha noqotee, faallooyinkaagu waxay ka tarjumayaan habka aad u tahay, fikirkaaga, iyo anigu, sidii aan hore u sheegay, waan ixtiraamayaa taas. 😉
Waa hagaag, waxa ku saabsan Linus wax ay ku qabato, waxaad uga tagtay iyada oo ka muuqata jawaabtaada koowaad, laakiin faahfaahinta faahfaahinta ayaa abuuri doonta isku dhacyo.
Marka laga hadlayo jawaabtaada faalladayda, waa mid gebi ahaanba la aqbalay oo mahadsan ... Waxaan ula jeedaa - maahan waxqabad - Waxaan ka hadlayaa qurxinta, taas oo ah waxyaabo kala duwan. Si fiican maku sharixi karaa KDE, oo aad u shaqeyneysa, ma ahan qurux.
Waxaad tahay barnaamijiye dhanka kalena waan naqshadeeyaa, haddii aad barnaamij abuurto, waan ku dhaliili karaa bilic ahaan, waxaan kaa dhigi karaa talo-hawl-qabad-waxa aanan awoodin waa dhaliilayaa koodhka.
Waxaa jira laba shay oo aad muhiim u ah oo macalin reer Cuba ah ayaa i baray. Roberto P. Leon.
- Dhaleeceynu marna ma aha mid wax dumisa, dhaleecaynta ayaa falanqeysa qaybaha wanaagsan iyo kuwa xun labadaba. Iyo inaad awood u leedahay inaad wax dhaleecayso waa inaad aqoon ku filan u leedahay maadada.
- Xiriiriyaha bulshada marka laga reebo muujinta wararka, wuxuu sameeyaa wax ka muhiimsan ... Waxbarto.
Haddaba, muxuu noqon lahaa qaybta wax dhisaysa iyo tan waxbarasho?
PS: waad ku mahadsan tahay martiqaadka waxaan ku aqbalay farxad.
Hagaag, saaxiib maahan, sidaan horeyba kuugu sheegay, in aan waxba lagugula qaban wax kale. Waxaa intaa dheer, aniga ahaan Gnome Shell wuxuu ahaa masiibo dheer kahor Linus inuu ku fikiro inuu dhaho wax sidan oo kale ah.
Hagaag hada waan yaabay. Waa inaan arko fikradda sharraxaadda hal jeer oo dheeri ah, maxaa yeelay malaha kama wada hadlayno wax isku mid ah. Waxay noqon laheyd mid xiiso leh haddii aad ku doodeyso aragtidaada wax yar.
Xiiso leh, in kastoo xaaladdan aan jeclahay qaybta Naqshadeynta. Kaliya waxaan rabay inaan cadeeyo 😀
Macallinku aad buu u saxsan yahay .. in kasta oo aqoonta aan u leeyahay maadada aan durba u malaynayo in aan wax ka horumariyay faalladaydii hore. Ma ihi Isgaarsiin, nasiib daro mararka qaar ma aqaano sida dadka badan loo gaarsiiyo.
Raaxeeyaha waa kan. Dadka aqoonta leh ee intii karaan kooda ah sameyn kara si ay nooga dhigaan kuwo wanaagsan ayaa markasta la soo dhaweynayaa.
"Waxay noqon laheyd mid xiiso leh haddii aad ka doodi karto aragtidaada wax yar."
Hagaag, shaqo kasta oo muuqaal ah waa inay ka koobantahay sharciyada aasaasiga ah ee halabuurka, gaar ahaan barnaamijka iskuxirku wuxuu galayaa waxa loogu yeeri karo farshaxan cusub oo tijaabo ah oo aad uga fog rinjiyeynta, sawir ama filim maxaa yeelay wuxuu la falgalaa oo xiriir la leeyahay isticmaalaha.
Xaaladdan oo kale, Shell waxay gacanta ku haysaa waxyaabo soo jiitay dareenkeyga si aan ula macaamilo isticmaalaha. Isu dheellitir iyo waqti-bannaan.
Isu dheelitirku wuxuu ka gudbaa naqshadda cunsurrada, sida ay u muujiso walxaha shaashadda si dhammaystiran udub dhexaad u ah iyo halabuur aad u taxaddar badan, meel bannaan oo sax ah oo u dhexeysa xubno iswaafajin ah ... Maxaa lagu kasbaday tan? dareenno aan la barbardhigi karin oo ah xasilloonida, amniga, iyo kuwo kale oo la qiimeeyo ka dib markii dhowr saacadood lagu qaatay kormeeraha hortiisa.
Waqti-bannaan, Shell waxay ku hirgelisaa is-dhexgal mana isticmaasho baarka xulashada caadiga ah. Markaad dooraneyso Hawlaha, waxaan qallajineynaa desktop-ka, waxaan bedeleynaa diyaarado waxaanan u dhaqaaqeynaa meel kale isla waqtigaas, xulashada daaqadaha, waa isku mid markaan dooranayno codsiyada Maxay tan ku guuleysanaysaa waa inay diirada saaraan feejignaanta, feejignaan dheeri ah = waxqabad fiican iyo natiijooyin wanaagsan.
Shell leh walxahaani waxay diirada saaraan waxa la qabanayo, maadaama aysan laheyn walxo kale shaashadda, sida barta waxqabadka, waxay diirada saareysaa dhamaan feejignaanta cunsurka hada jira, waa isku mid markii daaqad kale loo wareejinayo, barta diirada ayaa la badalay.
Waxaa loogu talagalay inay noqoto mid shaqeyneysa oo firfircoon, iyadoo mid ka mid gacanta ku haysa jiirka iyo tan kale ee kumbuyuutarka. Waa desktop-ka kaliya ee aan ogahay in qaab fudud, adigoo riixaya fure (Super) uu ku tusayo daaqadaha iyo desktops-yada oo dhan, oo lagu daray hal guji ayaa ku tusaya "dhan" codsiyada, oo lagu daray guji kale oo ah qayb. Ama adigoo riixaya Super + B + Enter wuxuu furaa Isku dar (kiiskeyga) ...
Waxaan samayn karaa anigoo riixaya Super + B + Gali wax kasta oo ii furan, socodsiiya qoraal, ama sameeya wax alla waxaan rabo. Tan waxaa sameeya ku dhowaad jawi kasta oo desktop ah, waxaan dhihi karaa inaysan noqon mid dhammaystiran.
Dabcan, haddii KZKG ^ Gaara, laakiin maahan waxa aan ula jeedo, Shell uma baahna inay wax sameyso si ay u sameyso maxaa yeelay waa qaabkeeda shaqadeed, marka laga reebo inay caqli leedahay, barnaamijku wuxuu aqoonsan yahay barnaamijyada inta badan la isticmaalo waxayna ku dhigtaa iyaga marka hore iyagoo riixaya hal ama laba xaraf.
Saaxiib, waxaad moodaa inaad ilaawday in qof kastaa uusan kantarooleynin (ama shaqeyn) adeegsiga toobiye app. Xaqiiqda fudud ee loo aado HotCorner si loo muujiyo codsiyada furan waa tallaabo aan loo baahnayn, oo aan ku keydinayno inaan leenahay liiska daaqadaha guddiga. KDE, Xfce, way ogyihiin. KDE tusaale ahaan, waxay leedahay awood ay ku bedesho fikradda waxa aan u naqaano desktop-ka, hase yeeshe, waxay daacad u ahaadeen isla qorshihii aan sanadaha naqaanay: Guddi, Liis, Liistada Windows, Nidaamka Tray ... iwm.
Marka waxaan ka hadlaynaa isla wax ka mid ah aragtiyada kala duwan, markaan ka hadlayno isticmaalka aaladda. Sikastaba ha ahaatee wali maheysto ceebaha ay leedahay, markaan sameeyo waxaad u maleyneysaa inaan necbahay Shell.
Macaamil naqshad iyo farshaxan. dijo
Waxaan isbarayaa marka hore. Waxaan haystaa laba heer sare, xisaab iyo fiisikis, haddana waxaan la joogaa dhakhtar. Waxaan ahay 25 jir kaliya.
Hal shay ayaad ilowday. Farshaxanka iyo naqshadeynta labadaba waxaa iska leh qof walba, ma ahan oo keliya naqshadeeyayaasha iyo / ama farshaxanleyda. Markaad tahay "saynisyahan" xagga farshaxanka ah, waxaad ku arki kartaa faahfaahin badan oo yaab leh Gnome-Shell, laakiin runtu waxay tahay in dad badani aysan jeclayn. Dhibaatadu way jirtaa.
Waxaan ku arkaa xisaabta iyo fiisikiska meelkasta laakiin hadaan iska dhigo qof walbaa wuu arkay… way fiicnaan laheyd.
Farshaxankaagu aad buu u fiicnaan karaa wax badana waad ogaan kartaa ... laakiin "dadku" waa inay jeclaadaan iyadoon loo eegin inay wax ka fahmayaan ama ka fahmayaan arimahan.
Ha iiga bilaabin fanaaniinta iyo saynisyahanada khaldan ee la fahmay ee dunida badalay. Waad awoodaa inaad fahanto waxa aan idhi adigoon qaadan eraygii ugu dambeeyay guriga.
Waan ka helay fikirkaaga qolofta gnome, laakiin waan ka bilaabi lahaa halkaas.
PS Cafi heerkeyga Isbaanishka, maahan luqadeyda. Sidaan ku hadlo 5. Khibraddu ma aha qaraabo? U fiirso, waxaa jira dhalinyaro badan oo karti badan.
Jawaab Macaamil naqshad iyo farshaxan.
Macaamil naqshad iyo farshaxan. Aan aragno, xaggee ayaan kaaga bilaabayaa….
Dib-u-soo-celintaadu waa mid cajiib ah inaad tahay 25 sano jir oo aad haysato laba darajo oo ah 6 sano ama ka badan iyo Ph.D. oo socda oo lagu daray shan luqadood. Taasi waa dhinaca wanaagsan ee waalidkaa inay noqdaan maalqabeeno, wax walbana way kusiiyaan, waligaa biir kuma lihid, gabar saaxiib ah iyo masuuliyad nooc kasta ha noqotee (hadday taasi tahay kiiskaaga).
Mar labaad iyo sidoo kale waxaan kuu sheegayaa, waxaa jira -codsiga- saaxiib macaamil ... kahor iyo kadibba. Maxaan ugu bilaabayaa sababaynta sabab la'aan?
Farshaxanka qof walba ayaa iska leh, sida iska cad inaad ku guuleysatay aad, laakiin macnaheedu maahan in farshaxanka la fahmo, "farshaxanka lama fahmayo, waa la dareemayaa" mise waa inaad wax fahmeysaa markaad aragto Picasso's Guernica ama Los Girasoles ee Van Gogh?
Haddii qaarkood ay jecelyihiin Gnome Shell qaarna aysan jeclayn, markaa waxaad ku socotaa wadada saxda ah 🙂 taasi waa caqliga ka dambeeya tartanka bilaashka ah.
Waxaa jiri kara dhalinyaro badan oo karti badan laakiin haddii aysan waxba sameynin si ay isugu dayaan inay horumariyaan baahiyaha deegaankooda, waa dhexdhexaad.
Haddii aan u baahdo in aan falanqeeyo qoraalkaaga, waxaan kuu sheegi lahaa si aad u noqoto xisaabyahan, waxaa iska cad in qoraalka uu leeyahay qaacido, in aad si ula kac ah u leexisay Isbaanishka iyo in laga soo bilaabo 17 sano oo aad ku lumiso saacado badan oo waqtigaaga ah shabakadaha bulshada.
PS: Ma aheyn inaan iska cafiyo Isbaanishkaaga, (waan aqbalay) adiga ayaa ah qofka ay tahay inuu iska cafiyo.
Ma aragtay qaybta:
"Waan ka helay fikirkaaga qolofta gnome, laakiin waan ka bilaabi lahaa halkaas." (oo jooji macno darrada kale)
Haddii ay aniga ila tahay in kasta oo sababayntaadu ay wanaagsan tahay, iskama dhigi kartid in qof walbaaba arko. Halkaasna waxaad la geleysaa faallooyinka, oo aan ka helay xiiso. Kaliya waxaan iskudayay inaan dhaho mararka qaar, fekerkeyga, dareenada uma baahna dood.
Si toos ah kumaan qasan. Waa run in faallooyinkiisii ​​ugu horreeyay uu ahaa mid aan badnayn, wuxuu umuuqday mid aan micne lahayn, isla weyni iyo amar ku taagleyn.
Kuma qasmin noloshiisa, kaliya jidadkiisa.
Haddii ay tahay inaan falanqeeyo qoraaladaada, waxaad moodaa inuu yahay nin 45 jir ah oo sanadihiisu culeys ka badan yihiin kuwii la rabay, isla weynaaday oo aan waxba ka qaban karin waqtigiisa firaaqada. Laga soo bilaabo faallooyinka ku saabsan lacagta iyo nolosha bulshada waa inaan fahmaa inaad ku jahwareersan tahay labadan arrimood.
Wuxuu ku qasbanaan lahaa inuu sameeyo asxaab badan oo asxaabtiisa ah.
PS Mar kale iga raali noqo Isbaanishkayga.
Macaamiil ... Waan ka cudurdaaranayaa haddii ra'yigeygu kaa qaldamay, laakiin sidaan kuu sheego macnaha guud waa lagama maarmaan, waxaan ku arkay faallooyin aan la tirin karin dhammaan baloogyada iyo fagaarayaasha dadka aan fikrad ka haysan waxa ay ka hadlayaan oo aan xitaa is aqoonsan.
Nasiib darrose waa lama huraan, waayo? maxaa yeelay waxaan aad u caadeysanay inaan aqrino dhaliil aan falanqeyneyn ka dibna aan u adeegsano ereyo xumaan ah si aan u qalmin qoraaga iyadoo aan la helin wax dood ah noocuu doono ha noqdee.
Waxaan ku noolahay wadan dad badani yaqaanaan dadyyanky dad aad uyarna yaqaanaan Lezama, hadii aan bulsho wareersan yahay, laakiin ma sharixi doono sababta, wali ma fahmi doontid.
Markaa maaha Lezama? Hehehe, maxaa yeelay hadda sababo shaqo awgood waxaan ku lug leeyahay Lezama, Vitier, Retamar .. si kastaba ha noqotee .. Laakiin waxaan kuu sheegayaa wax saaxiib ah, maadaama ay jiraan dad badan oo leh tusmooyin sare oo aqoon la’aanta dhaqanka (si uun ha loo dhigo), sidoo kale Waan ogahay arday badan oo jaamacadeed oo leh aqoon ka hooseysa dadka haysta shahaadooyinka tacliinta hoose. Adduunyada (inay ahaato adduunka) waa inay jiraan wax walba 😀
Aniga iyo adigu miyaanu isku dal nahay? O_O… LOL !!!
Wadanka dhageysiga Beatles uu yahay «wax duug ah oo duugoobay»Dhegeysiga reggeatón waa«noqo qabow oo moodada»... _ × I dil fadlan…
Lezama, Vitier, Retamar ... Muxuu yahay shaqo fudud oo aad qarash gareyso, waxaan leeyahay Lezama inaad wax sheegto, in kastoo aan u maleynayo inay mucjiso noqon doonto.
Haddii, sidoo kale adduunkan wax walba, iyo xiisaha leh, xirfadlayaal xirfadeed, dad iskood wax u baray oo aan wax ka baran jaamacad ay yihiin kuwa ugu diyaarsan, waxay noqon doontaa sababta oo ah waxay sidaas ku sameeyaan aaminaad darteed.
Oo waxaan u maleynayaa inaan ku nool nahay isla adduun, KZKG ^ Gaara mawduucan yar ee reggaeton waa shar guud. Jiil kastaa wuxuu leeyahay qaabkiisa iyo halkudhigiisa, markaa, madaxayga kuma saabsana inay tahay inay dumarka ka hoosaysiiyaan wax kasta oo aan lahayn wax farriin ah, laga soo bilaabo perreo pa down: /
Xitaa ha dhihin, taasi xitaa muusig ma ahan. Maalin kasta waxaan inbadan ka baqayaa mustaqbalka tartanka… LOL !!
"KDE, oo aad u shaqeyneysa, ma ahan bilic."
Waa maxay?!?! EPIC WTF master xD
Inaadan jeclayn sharraxaadda 'KDE SC' waa mid gebi ahaanba la fahmi karo maaddaama aynaan dhammaanteen isku dhadhamin, tusaale ahaan [trolling] @elav wuxuu adeegsadaa Xfce, VIM iyo Debian iyo aniga, oo mar horeba da 'weynaa, waxaan isticmaalaa KDE SC, Emacs iyo Arch [/ trolling].
Waa maxay nooca KDE SC ee aad dhahdo ma ahan bilic? Ma helin in aan isticmaalo 3.5 laakiin qabashada meel kasta oo ka mid ah waxay muujineysaa inay aad u qurux badneyd!
Ma hubtaa waxa aad leedahay? Maheysid jawi desktop qalad ah? Miyaanay ahayn FWM waxaad ka hadlayso? xD
Ninyahow, ma jecli kartid KDE, laakiin gebi ahaanba waad khaldan tahay, waxaan dhihi lahaa KDE SC 4.8.4 ma ahan bilic.
Waxaan kugu martiqaadayaa inaad muujiso shaashad meesha aad u malaynayso inay tahay KDE
Waan sii wadaynaa ... 🙂
- Caddayn, wax muhiim ah in xisaabta lagu darsado waa adeegsadaha, waxaa jira kumanaan qaab oo loo adeegsado desktop qof walbana wuu ka duwan yahay, desktop gamers-kiisu ma aha mid u dhigma miisaska qoraaga. -
KDE si fiican ayaa loo arki karaa, wax kale ayaa ah in la isticmaalo.
Ficil ahaan waxa laga yaabaa inay fududahay in la isticmaalo ama awood ku yeesho shaqooyinkeeda. Qurxinta waxay noqon kartaa inay u egtahay qurux ama inay si sax ah u kooban tahay. Dhamaan kumbuyuutarradu waxay ku fashilmaan halabuurka maxaa yeelay waligood kama arkin aragti ahaan, xiriirka xiriirka isticmaalaha - isdhexgalka. Tusaalaha xiisaha leh ee guusha leh ayaa ah IOS-ka iPhone-ka.
Adigoon dhigin shaashadda, tusaalooyinka qaarkood ee cilladda bilicsanaanta:
- Isticmaal nuur buluug ah daaqadda la xushay. Haddii madow loo isticmaalo sida hooska waa sababta oo ah midab ma ahan, waa cunsur dhexdhexaad ah. Midab kasta oo kale ayaa qarxiya muuqaalka waana mashquuliyaa.
- Windows translucent marka la jiidayo. Uma maleynayo inaan ahay qofka kaliya ee lumiyay diirada markaan daaqada Plasma u wareejinayo.
- Qaabka menu-ka Windows. Dhammaan miisaanka shaashadda ee menu-ga weyn ee KDE wuxuu ku dhacayaa dhinaca bidix, taasi waa cillad ah "isku-dheellitirnaanta halabuurka" waana mowduuc aad u dheer.
Marka laga hadlayo shaqeynta, aan runta sheegno, menu-ku waa yara yaraaday. Desktop-ka, haddii Shell-ka ay ka saarto shaqooyinka, Plasma waxaa ku dhaca wax la mid ah maxaa yeelay beddelashada gidaarka ayaa niyad-jab ku noqon kara gaar ahaan adeegsadaha caadiga ah.
KDE iyo barnaamijyada ay horumariyaan waxay ila muuqdaan inay yihiin kuwa ugu wanaagsan OpenSource, inbadan oo aan arko ceebaha qurxinta. Tusaalaha Krita: Qalabka midigta kore, "Ikhtiyaarrada qalabka" ee bidixda hoose.
Barmaamijyada isdhexgalka waxay mudan yihiin fiiro gaar ah maxaa yeelay waxay maareeyaan walxaha sawir, filim iyo animation, kaaga sii darane waxay la xiriiraan isticmaalaha.
+1 Faallada. Hadda, aan ka hadalno miisaska kale. Waan ka door biday Midnimada a Qolofta Gnome Sababta Waa hagaag, waa su'aal ku saabsan shaqeynta kiiskan .. Aynu tusaale u soo qaadanno:
- Waxaan haynaa 4 codsi oo furan.
Haddii aan rabo inaan doorto midkood (adigoo gujinaya), maxaa dhacaya?
- Gnome Shell waa inaan ku dhejiyaa furaha Super (Windows) ama ku dul wareejiyaa hudheelka 'HotCorner', oo gujiya arjiga, oo ah, saddex tallaabo.
- Midnimada Kaliya waa inaan u wareejiyaa tilmaamha markabka (oo Mac uusan jecleyn) iyo voila, hal talaabo.
@ Liibaan.yare1 KDE waad ka badali kartaa bilicsanaanta wax walba, oo ay kujiraan dhalaalka buluuga, hufnaanta, menus, ... Waxaad badali kartaa qaabeynta waxyaabaha kujira arjiga, kudar / ka saar badhamada, waxaad abuuri kartaa tuuryo kumbuyuutar, ... Kaliya waa inaad sameysaa cilmi baaris yar si aad uga tagto deegaanka aad jeceshahay iyo sifooyinka aad u baahan tahay.
Midnimada ... waxay igu baraarujisaa xiriir jacayl iyo nacayb sida kuwa kale oo yar, waxay la mid tahay isku darka miisaska oo dhan hal.
Waxaan ka helay ujeedkiisa inuu saxo cilladaha ku jira Shell. Waxay tirtiraan dhammaan waxyaabaha Gnome uu u shaqeeyo nus ahaan xisaabaadka internetka ama Evolution waxayna adeegsadaan waxyaabaha shaqeeya, Thunderbird. Iyo desktop-ka waa la isticmaali karaa 🙂
Liiska sare ee 'Mac-style' wuxuu ku siinayaa faa iido oo wuxuu keydinayaa meelo badan. A Launcher-ka Windows 7-ka ah ee loo yaqaan 'Launcher' ayaa si aad ah waxtar ugu leh beddelka barnaamijka degdegga ah Dashku waxay u egtahay sida Shell laakiin leh hormoonno. Ujeedooyin cad oo u dhigma muuqaalka muuqaal ahaaneed ee Plasma. Waxayna ku shaqeyn kartaa xiriir sidoo kale.
Hadda qof kasta oo akhriya tan wuxuu u maleynayaa inuu yahay desktop-ka saxda ah, si fiican maya, waxay lamid tahay Shell, waa shaqsiyad la'aan, aad ayey u culus tahay, marar badan ayay dhacdaa.
Intaa oo dhan oo aan ku noolaan karay haddii Launcher uusan jirin, baarka MULTICOLOR, chameleon, fosfrescent, «wuxuu ku dhegan yahay bidixda shaashadda oo wuxuu la tallaabay baanka cuntada (¬¬) Inay yihiin Afrikaan oo ay doonayaan inay matalaan dhaxalkooda iyo midabbadooda. Waan bogaadinayaa, laakiin inay iyagu dusha kaa saaraan, maya, yaa ku foogan kara baarkaas xitaa haddii uu qarin karo. Waxa kaliya ee ay sameyso waa in si dhaqso leh loo helo qof aad jeceshahay, laakiin marka ay tahay inaad ka raadiso barnaamijka Dash waa sidan:
Dhagsii Dash / Codsiyada / Lagu rakibay eeg natiijooyinka / Sifee natiijooyinka / Nooca / arjiga… wadar ahaan 6 guji si aad u aado codsi kale oo aadan haysan kuwa aad ugu jeceshahay.
Dhinaca kale, oo ma aha inay kaa hor imaanayso elav, Shell-ka waxaa ku yaal 2 tallaabo oo lagu furo wax la jecel yahay; Hal dhaqdhaqaaq jiir ah, Hotcorner - doorbidid oo guji ... sida midnimada ama Plasma oo kale.
Laakiin sida Windóusico u leeyahay, waa lagu habeyn karaa KDE, run, laakiin waxaan arkaa gobolka caadiga ah, badeecada ay ku siinayaan, taas oo qiyaastii ah aragtida koowaad.
Aniguna kama fiicna inaan sii wado hadalka inaan ku dhamaan doono isticmaalka KDE ^ _ ^
Mudane Lex.RC1, kaliya labo shay:
1. Ma jiro wax dood ah oo ku saabsan sheegashadiisa oo dhan.
2. Waxaa jira khaladaad badan, sida waxa loogu yeero "fallacy of authority": "waxaad la hadlaysaa qof kaa weyn," "Waxaan haystaa labo shahaado jaamacadeed."
Mudane, waa wax laga xishoodo in isaga oo da ’ah iyo labo shahaado oo jaamacadeed ah uu wax yar oo xanaaq ah tuuro maxaa yeelay waxaa lagu dhaliilay deegaanka uu jecel yahay.
elav, tani waa waxa aan uga jeedo qaybta aadan fahmin ...
Luis wuxuu igu weerarayaa luuqad qalafsan (oo aan aqbalo) si uu u muujiyo fikirkiisa - isagoon ogayn macnaha guud.
Luis, waxaan sifiican iskaga sharixi doonaa laba qodob.
- Kama hadlayo shaqeynta, shell shaqadiisa wey liidataa ... Waxaan ka hadlayaa bilicsanaanta.
- Ma tuuri karo xanaaq, waxaan qirayaa inaan jeclahay Shell laakiin waxaan si buuxda ula shaqeyn karaa LXDE, deegaankeygu waa waxa ugu yar ee ugu muhiimsan nidaamka, waxaan aad uga walaacsanahay barnaamijyada aan adeegsado ee ku shaqeeya nidaamkaas.
Waxaana xusid mudan inaysan ahayn "fallalaad maamul", waxaan aasaasey qodob tilmaamaya inaanan u hadleynin inaan hadlo oo keliya.
Okay, Lex. 1. !
Saaxiib Lex.RRC1, laakiin waa in wax walba ay markaas ku yimaadaan arrin dhadhan, waana taas sababta aan u taageersanahay ra'yigeyga xitaa inbadan. Waxaan horeyba u oggol nahay in howlgalka Shell uu liito, laakiin bilic ahaan aniga ahaan sidoo kale waa aniga. Labadaba madow oo leh geesaha wareegsan ... ama maya ... Sidoo kale, fiiri faahfaahin kasta, cunsur walba waxaadna arki doontaa in Gnome Shell uu noqon karo "bilic ahaan" wax aad uga wanaagsan.
Waxaana xusid mudan in aysan ahayn "Fallacy of authority", waxaan aasaasayaa qodob tilmaamaya in aanan ku hadleyn kaliya in aan hadlo.
Halkaa marka laga hadlayo, markaa markaa waxaan kuu sheegi karaa aniga oo aan Jaamacad ahayn, in aan 5 sano ka ahaa Shabakad iyo Maamulaha Nidaamyada, oo aan ka taliyo adeegyo badan oo ka socda GNU / Linux, taas oo, si lama filaan ah, aan u soo joogay in ka badan 5 sano wixii aan soo maray in ka badan 3 Degaan Desktop, iyo dhowr maamuleyaal Windows ah, oo aan ku rakibayo mashiinno noocyo kala duwan leh, taas oo i siisay waaya aragnimada lagama maarmaanka u ah qoritaanka maqaal sidan oo kale ah oo dad badani dhaleeceeyeen.
Waxay gebi ahaanba wanaajin kartaa oo mid ka mid ah waxyaabihii sida xun iiga muuqday markii aan Shell furay markii ugu horreysay waxay ahayd baarkaas weyn ee cinwaanka ah, oo lagu daray menu-ka, oo lagu daray baarka madow ee sare, waxaad lumineysaa meel badan oo faa'iido leh, laakiin sida aan kor ku soo sheegnay, sidoo kale waxaa jira walxaha kale ee ciyaarta soo gala sida halabuurka. Xaqiiqda ah inaysan iyagu lahayn maareeye mawduuc asal ah gebi ahaanba waan cambaareynayaa, waad ogtahay inaan ahay mid ka mid ah kuwa jecel xisaabinta fudud / dhammaan isticmaalaha.
Dhaleeceynta waa mid la aqbali karo iyadoo lagu xisaabtamayo in aqrintu tahay mid shaqsiyadeed oo shaqsiyeed, marar badan aqristaha ayaa tarjumi kara waxyaabo uusan qoraagu rabin inuu sheego.
Adoo ka faa'iideysanaya khibradaada shabakadaha, ma sameyn kartaa boosteejo (aad u fudud) si aad ula wadaagto fayl ka mid ah server illaa dhowr mashiin? haddii aad ku dhajisan karto galkaas qaab windows-u qaab adag u wado 😉
Waxaan u arkaa dooda "waxaad la hadlaysaa qof kaa weyn", "oo leh laba shahaado jaamacadeed" iyo blah blah blah… Miyaad fileysaa inay taas kugu ixtiraamaan? Ku daweyn maayo maxaa yeelay waad iga weyn tahay, ixtiraamku lama yimaado da ', WAA LAGU GUULAY. Meeshaada xirfadeed waxaa laga yaabaa inaad caan ku tahay laakiin Linux: maxaad sameysay? Wax ma dhajisey? Wadashaqeyn lalahaa kernleyda malaha? Ma qortay barnaamijyo kuu gaar ah? Ma waxaad tahay baakad? Na tus waxa aad qabatay waxaan bilaabayaa inaan xushmad yar kuu muujiyo oo xitaa raaligelin ka bixiyo qoraalkan, haddii kale, ha u imaanin inaad tiraahdid waxaad tahay nin da 'ah oo u qalma ixtiraam fudud sababtoo ah waan ka weynahay oo waxaan ka sii bartay jaamacadaha.
Ha iila dhaqmin sidaad u rabto (ma ihi da 'sidoo kale)
Hagaag maya, waxba uma qabanin "Linux" waa inaad fahanto laba shay oo sax ah ... anigu barnaamij ma ihi inkasta oo aan jeclaan lahaa. Aniguna wadankeyga waxaan ku leeyahay dagaallo aniga ii gaar ah oo aan la dagaallamo. Tan waxaan rabaa inaan kuu sheego inaanan kala furin dunida furan laakiin waxaan ka shaqeeyaa bulsho ahaan, gaar ahaan waxbarashada iyo dhaqanka caruurta iyo dhalinyarada si mustaqbalka dhalinyarada aysan u lahaan dabeecad la mid ah tan aad haysato waqtigaan.
Iyo haa, waxaan kasbaday xushmad dadka qaar, laakiin waxaa jira kuwa kale oo i neceb. 😉
PS: Waan ku faraxsanahay higgaadinta iyo naxwaha wanaagsan
1) Uma baahnid inaad noqotid barnaamij. Markii aad tiri erayga "farshaxan" waxaan moodayay inaad soo bandhigi doontid joornaal shaqo, sawir-qaade, sawirro, maqaar, iwm
2) Dhamaanteen waxaan leenahay dagaalo noo gaar ah.
3) Waxaan u arkaa wax aad u fiican inaad dhalinyaradaada bartaan waxbarashada iyo dhaqanka. Hadda haddii aad tahay waxa aad baraysid waxaad bilaabi kartaa inaad iska dhigto faanka oo aad u bareysid inaad is-hoosaysiiso.
Waxaan damacsanahay inaan sameeyo wax aan ku taageero Aaladda Furan, laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa haddii aan sameeyo, inay bulsho ahaan ka waxtar badan tahay gidaarka gidaarada.
habboon, sidoo kale waxaa jira macnaha guud, ka hor iyo suurtagal ka dib iyo ereyadaada waxay muujinayaan dulqaad la'aan xaqiiqda ah inaad xirfadle tahay inaad ku jahwareerto faan. Ma rajaynayo ixtiraamkaaga waxaan leeyahay, waxaan ka mid ahay dadka aaminsan in xaqiiqadu ka hadlayso hadalka.
«... inaan ku tijaabiyo maxaa yeelay ...»
Laga soo bilaabo waxa uu sheegayo, xoogiisa ma ahan barnaamij, laakiin inuu fikrad ka dhiibto kalsoonida noocaas ah, waa inuu noqdaa inuu ka tirsan yahay kooxda naqshadeynta qaybinta qayb ka mid ah ama jawiga desktop-ka.
Faallooyinka, ma aanan helin raaxo ah inaan ka shaqeeyo mashruuca 'Source Source Open', laakiin waxaan ka qayb qaatay mashaariic xorriyadda fikirka ah iyo gaar ahaan maqal iyo muuqaalba. 🙂
faalleeyaha, (Waxaan u maleynayaa inaan kuugu jawaabay oo aanan siinin si aan u daabaco) Runtii lama shaqeynayo wax mashruuc Furan, haddii aan la wadaago falsafadda xorriyadda oo aan naftayda u huro macnaha sawirka, inta badanna maqalka iyo muuqaalka.
Nacalad, tan ayaa ka wanaagsan filimka: P.
Waxaan ahay wiil dhalinyaro ah oo 14 jir ah, oo raba laba shay, marka hore, inaan noqdo naqshadeeye farshaxan yaqaan (waxaan si gaar ah u xiiseeyaa sawirada) iyo tan labaad, inaan ku noolaado Norway.
Maxaan waxan u qorayaa Si aan isu baro, oo aan kuu sheego jawaabtaada ku saabsan Gnome Shell way i cajabisay, waxaanan la wadaagaa ra'yigaaga in maqaalkan / ra'yigani uu yahay mid aad u jaalle ah, oo aan lahayn doodo aan ahayn tan astaamaha, fikrad In kasta oo ay ra’yi tahay, waxay u baahan tahay doodo lagu taageerayo, waxay la mid tahay haddaan idhi «waan necbahay Fromlinux.net», qof ayaa i weydiiyay «Sabab?», Kama jawaabi karo «Maxay haa tahay», waxaan u baahan lahaa inaan dooddayda bixiyo, haddii aanan haysan Waa doqonimo in la yiraahdo waan necbahay anigoon xitaa ogeyn sababta.
Sacab iyo salaan diiran.
Jawaab Carlos Eduardo Gorgonzalez Carrito
Waad ku mahadsan tahay Carlos iyo Mr waa badan yahay ...
Haddii aad dooneysid inaad wax baratid naqshadeynta waxaan kuu rajeynayaa sida ugu fiican oo aad jeceshahay dhammaan xirfadaha ama shaqooyinka waxay u baahan yihiin adkeysi iyo daraasad badan. Laakiin waad jeceshahay falanqaynta, waxaad u sii badan tahay nus-qabyada sawirka.
Dhaleeceynta had iyo jeer waa wax dhisid, xitaa haddii aad qorto inaadan jeclayn Desdelinux oo aad si ixtiraam leh u taageerto, waan hubaa inaysan noqon doonin mid aan laga warqabin 😉
Waan ku raacsanahay waxaad tiri, mawduuca gnome-shell waa mid aad u fool xun, waxay u baahan yihiin inay casriyeeyaan ama wax kale (oksijiinta caadiga ah ee kde ma ahan inaan kaliya jeclaaday, laakiin waxay ka fiicantahay tan gnome).
Waxay sidoo kale furtay in lagu daro barnaamij ama tilmaamid ama wax si dadku ugu rakibaan kordhinta si fudud. Way fiicantahay in laga helo biraawsarka, laakiin haddii aadan aqoon webka meesha laga raadsado, ma heli doontid fiditaanadan, ugu yaraan hal marin oo dhinaca bidix ah oo loogu talagalay webka fidinta ama wax la mid ah.
Ugu dambayntiina ku dar habayn. Isticmaalayaasha waxay jecelyihiin inay astaamiyaan kombuyutarkooda, kde waxay ku siinayaan boqolaal ikhtiyaar (mararka qaarkood way aad u badan yihiin) sidaa darteed isticmaale aan aqoon badan u lahayn wuxuu uga tagi karaa desktop-ka wixii ay jecel yihiin, gnome-ka arimahan wax dhib ah kuma soo kordhin karo.
Ku jawaab Aetsu
Taasi waa wax aan waligay ka jeclaa KDE. Ma rabtaa duluc? Hagaag, waxaad aadeysaa gudiga xakamaynta, oo dooro kuwa ku yimaada asal ahaan. Ma jeceshahay? Dhib malahan, waxaad gujisaa ikhtiyaarka inaad kudariso mowduucyo kale oo KDE-LOOK, waxaad kala soo bixi kartaa kuwa aad ugu jeceshahay. Uma maleynayo. Laakiin waad aragtaa, haddii aadan weli go'aansan inaad dhigto Gnome-Tweak-Tools, oo ah aalad aad u faa'iido badan, waxaad ka filan kartaa inta kale.
In kasta oo aan ku raacsanahay wax kasta oo ku xusan maqaalka, kaliya laba faahfaahin. Aqoontayda, Gnome 2 runti lama isticmaali karo ilaa nooca 2.20 ama sidaas, iyo KDE 4. ilaa 4.4. Gnome 3 ayaa hada soo baxday sida tan oraneysa, bulshada iyo horumariyeyaashuba si adag ayey ushaqeynayaan. Waxaan u maleynayaa waxa loo baahan yahay in waqti la siiyo.
Haa, waad saxantahay, laakiin waxaan horey u soo marnay Gnome 3.0, 3.2, 3.4 noocaan oo ah 3.5 wuxuu hordhac u yahay 3.6 waxayna ila tahay aniga, inay tahay waqtigii waxyar la qaan gaarin lahaa
Sidoo kale waxaan u maleynayaa nooca 3.0 inuu soo baxay sanad dabayaaqadiisii, maxaa yeelay wuxuu nadiifinayay oo xasilinayay.
PS: Maan jeclayn nooca cusub ee gnome, aad baan ula qabsan jiray noocyada 2.xx, maaddaama nooca 3-aad soo baxay, waxaan la socdaa xfce; Waxaan isku dayay inaan isticmaalo KDE, iftiin, LXDE, iwm. laakiin xaqiiqdii jawiga aan dareemayo sida ugufiican ee aan ulaqabto waa xfce.
Dhab ahaantii KDE ee v4.2 horeyba runti waa loo isticmaali karaa, in ka badan 80% 😀
Maxaa igu dilaya dhammaan waxyaabaha la soo sheegay, oo ah nooc kasta oo ka mid ah qolofta gnome waxay jabisaa nidaamka mawduucyada isla, waxaan jeclahay inaan sameeyo mawduucyo qolofta gnome, waxaan ka sameeyay kii ugu horreeyay ee qolofta gnome 3.0 markii aan tagay 3.2 waxay samaysay wax badan isbedelada, iyo iswaafaqsan, iyo isku mid dhanka 3.4. Waxaan horeyba uga quusanayay gnome, ma mudna in laga shaqeeyo.
Markii aan isku dayo inaan la joogo Gnome 3 waxaan ka quustay in aan u qaabeeyo sidaan jeclahay, rakibo kordhin si loo xaliyo arrimaha qolofta waa wax laga xumaado, marka lagu daro rakibidda gnome-tweak-tool maxaa yeelay waxtar ma leh in la kordhiyo iyada oo aan la awoodin in la qaabeeyo.
Waxaa laga yaabaa in Linus Torvalds uusan sidaa u qaldanayn all
Aynu siino waqti, GS waxay cadeyneysaa inay tahay mid aad u awood badan oo dabacsan, kaliya ma jirto wado looga kala habeyn karo meel meel dhexe ah waana inaad jabsataa nuska nidaamka si aad uhesho dhadhankeena / baahideena / isticmaalkeena ... laakiin waa la habeyn karaa, waa la xaqiijin karaa. Mint 12, Mint 13 Cinammon, SolusOS 2, Pinguy112.04, aasaasiga OS iyo dhammaan qaska meesha kuwa mas'uulka ka ah ay dhibaatada u geysteen si ay nidaamka gacan ugu qaadaan.
Kaalay, ka warran KDE PESTES ayaa laga hadlay markii ugu horreysay ee ay soo baxday maantana waa jawi desktop oo aad u wanaagsan.
Hagaag saaxiib, waa ra'yigeyga oo kaliya waana hubaa in badan aysan la wadaagin, laakiin hadda Gnome 3.X Laguma sifeyn karo inay tahay "Just out", waxay ku sugnaayeen wax ka badan sanad haddii aanan qaldamin oo ay sii wadaan qaladaad isku mid ah, iyaga oo aan wax cusub soo kordhin. Si daacad ah ii sheeg, ma u malaynaysaa sida ay wax u socdaan Qolofta Gnome ma siinaysaa falsafadaada maroojin? Sababtoo ah uma maleynayo.
Laakiin wax walba waa in kahor "tan" ay ahayd gnome 2 rajooyinkii sareeyayna ay ka dhasheen niyad jab
Laakiin xusuusnow waxa KDE 4 ahaa markay soo baxday, oo aan suurtagal ahayn in la isticmaalo!
Waxaan xasuustaa dhaleeceyntii dhinac walba ka da'ayeen, waxay la mid noqotay inay la soo noqdeen dabadooda dhexdooda lugaha laanta 3.5 ...
Kaliya markay gaareen 4.4 waxaa suurtagal ahayd in la yiraahdo KDE 4 wuxuu bilaabay inuu bislaado oo uu qaato qaabkii qorshayaashu qorsheeyeen inay siiyaan; nooca 4.5 wuxuu ahaa beddel ciyaarta macnaha ah inay ahayd sii deyntii ugu horreysay ee laanta KDE 4 inay ahaato mid gabi ahaanba deggan oo ka sarreysa dhammaan LA ISTICMAAL karo, halkaas ilaa qaybtaan KDE SC ayaa qaangaadhay oo ku korortay shaqooyinka iyo astaamaha iyadoo laga boodayo soohdin, waxaan dhihi lahaa waxaan dhihi lahaa in heer jibbaar ahaan ama joomatari ahaan halkii xisaab laga ahaan lahaa ...
Waxaan ku adkeysanayaa: GNOME 3 / Shell waa wax layaableh waana inaan waqti siino, hadda ma raacayo mashruuca sidaa darteed wax fikrad ah kama lihi halka xoogga la saarayo horumarintiisa, laakiin sida muuqata ma ahan qeybta qaabeynta astaamaha, ama gudiga xakamaynta ama faahfaahinta aan dhamaanteen u aragno mid aad u yar oo lama huraan ah 😉 laakiin sida muuqata way shaqaynayaan wax badana way daboolayaan.
Waxaan sidoo kale rajeynayey in hada garaafka uu dhameystirmay laakiin sida iska cad wali kama aysan qaban ama ma ahan mudnaan, ma aqaano ...
Aan aragno waxa ay u hayso nooca 3.6 😉
Guulleello (@abdiwahab) dijo
Laptop-ka si fiican ayaan u arki lahaa haddii ay xoogaa horumarsan yihiin, laakiin dhab ahaantii xaqiiqda ah in qaabeynta lagu sameeyo ballaarinno iyo in aan lagu darin wixii iska beddelay waxay iga dhigaysaa inaan si toos ah ugu aado deegaan kale. Sawirrada guud ahaan had iyo jeer waxay iila muuqdeen kuwo duugoobay oo wali taagan. Si daacadnimo ah, anigu waxaan ahay gnome, ugu yaraan illaa ay dib uga fiirsadaan (taasi heerkan illaa gnome 5 ama 6 waxba xD)
Jawaab Guillermo (@Xykyz)
Waan ku raacsanahay mawduuca iyo astaamaha asalka ah. Laakiin shaqsiyan, mar hadii mawduuca iyo astaamaha la badalo, waxaan jeclahay isticmaalka iyo fududaanta gnome 3. Fedora iyo Ubuntu gnome shell remix labaduba waxay ila mid yihiin sidii tallaal, oo aad uga fiican KDE. Waxaan u arkaa inay ka dhameystiran tahay XFCE, oo aan ahayn mid la beddeli karo laakiin wax badan ka sii dhammaystiran, marka laga reebo yaabka yar ee midori ah. Ka xasilloon marka loo eego qorfaha. Totem waxay si fudud u dabooshaa baahideyda. Uma isticmaalo maamule emayl sidaa darteed kama fikirayo horumarka. Marka la soo koobo, badanaa waxaan tijaabiyaa deegaanno badan laakiin waxaan isticmaalay gnome 7 muddo 3 bilood ah aadna waan u faraxsanahay. Dabcan, dhadhanka midabka.
Ah, hambalyo boggaaga cajiibka ah, mid ka mid ah kuwa ugu fiican Isbaanishka. Salaan ka timid Andalus.
Ku soo jawaab capidel
KDE oo aan ugu jeclahay markan, in kasta oo webiyaal dhiig ahi hubaal halkaan ku qulqulayaan, waxaan ka jeclahay Midnimada Gnome Shell. Waxaan ku raacsanahay dhinacyo badan qodobka 'Elav', laakiin wixii ka sarreeya, xagga dabacsanaanta wax ka beddelka deegaanka. Kama aanan ogeyn astaamaha illaa aad ku sheegtey maqaalka, in kasta oo ay run tahay inay had iyo jeer iila muuqdaan kuwo xad-dhaaf ah. In kasta oo aan rakibidda gnome-tweaks ay u muuqato qalad, haddana weli kuma filna in la xalliyo cilladaha Gnome 3, waxaana lagama maarmaan noqon lahayd in gacanta badan la saaro aagagga aan u roonayn dadka isticmaala qaarkood. Waxaan shaqsiyan isku dayay Gnome 3 Fedora, taas oo aan u maleynayo inay tahay mida ugu fiican ee iskudareysa (waxaan u adeegsaday Suse iyo Ubuntu sidoo kale), laakiin, waxaan layaabay, kordhinta, oo kudareysa shaqooyinka qaar ee umuuqda kuwo macquul ah, waxa kaliya ee ay gaarayaan waa xasilooni daro weyn .
Waxaan ku dhowaaday isla safarkiiagii oo waxaan ku soo gabagabeeyey Fedora-KDE. Dhibaatada kordhintu had iyo jeer waa isku mid, qaar badan ayaan la jaanqaadi karin noocyadii ugu dambeeyay ee Gnome-Shell, oo markii aad geliso, desktop-kaaga ayaa ku caayaya, ama shilalka, ama iwm ... Marka laga hadlayo astaamaha, waad beddeli kartaa cabirka adiga oo taabanaya feyl aanan hadda xasuusnayn, laakiin, sidaad u leedahay, mararka qaarkood waa inaad gacan aad u badan gelisaa si aad u saxdo.
Xaqiiqdii, waxyaabo badan oo Gnome Shell ah ayaa wax laga beddeli karaa adoo taabanaya mawduuca CSS, tusaale ahaan, laakiin maahan in qof uun halkaas tago.
Waad saxantahay, habaynta deegaankaaga desktop waa inay ahaataa hawl fudud; Uma maleynayo in tifaftirka feylasha ay tahay ikhtiyaarka ugu fiican maanta ee dejinta jawi desktop ah.
Dhab ahaan .. Waqtigan xaadirka ah waxa ugu yar ee ay lahaan karaan waa aalad lagu hagaajiyo desktop-ka iyadoon la taaban iota lambar.
Hagaag, bedelida astaamaha fedora maahan wax dhib badan sida ay umuuqato oo si fiican hehe… waxay kuxirantahay nooca astaamaha dabcan (: hadii ay yihiin faenza ama hoose, kadib teeb garaynta: sudo yum rakib faenza-icon-theme or sudo yum install elementary-icon -waxyaabaha loo diyaariyey waxaa lagu beddelay gnome-tweak-tool, in kastoo sidaad sheegto, haddii ay yihiin astaamo kale markaa ... yep waa inaad gacantaada dhigtaa: /
Hagaag, dhadhanka midabku, muddo dheer ayaan qolofta gnome-ga ku isticmaalayay faylkayga waana ku raacsanahay in astaamuhu aysan la socon naqshadda la soo jeediyay, laakiin? Sow wax lamid ah ma dhacaan markaad rabto inaad xfce ama sanduuqa furan? GNU / Linux waxaad fursad u leedahay inaad wax walba la qabsato, mise waad ku samayn kartaa winbug?.
Waxaan u maleynayaa inaan ku bilaabo dhaleeceynta aniga oo aan helin taageero aasaasi ah oo ka soo horjeeda mawqifka Malcer:
Ma fikrad xunbaa.
Dabcan, saaxiib, farqiga ayaa ah in Xfce, tusaale ahaan, uusan ka badneyn 5 horumariye oo si dhib leh ula qabsan kara barnaamijka. Gnome dhinaceeda, kaliya maahan mid horumar badan leh, laakiin shirkado muhiim ah ayaa ka dambeeya, iyo dhiirigelin dheeri ah, waxay helayaan tabarucaad.
Anigu waxaan ahay isticmaale fudud oo edeb daran oo 2007 rakibtay Ubuntu ugu horreysay isla markaaba gurigeyga ka dib waxaan durba qaatay Linux oo leh Gnome 2.x oo ah nidaamka kaliya ee aan ku shaqeeyo. Farxad baan ku noolaa ilaa Ubuntu ka dhigtay Midnimada mid waajib ah, xilligaas oo aan u wareegay Mint, illaa Gnome Shell ka soo baxo. Intaa wixii ka dambeeyay ilaa Mint 13 waxaa la igu qasbay inaan dib ugu noqdo Windows-ka, anigoo isku dayaya inaan la qabsado LXDE ama XFCE, kuwaas oo aad ugu eg Gnome-kii hore. Nasiib wanaagse, Mint 13 wuxuu ku daraa Mate, oo hadda ah miiskeyga.
Anigu ma ihi geek laakiin waxaan ahay isticmaale fudud sidaa darteedna waxaan raadinayaa fudeyd, raaxo iyo qaabeyn. Midnimada ama Gnome Shell waxay fikrad fiican u noqon kartaa taleefanka gacanta, laakiin isticmaalaha caadiga ah gebi ahaanba waa kuwo aan la isticmaali karin oo aad u adag. Goorma ayey barnaamijyayaashu fahmayaan?
Ku jawaab ozozo
Gabriel abdilahi (@abdirahmn) dijo
Sidee ku saabsan inaad siisaa SolusOS isku day? ikhtiyaar aad u xiiso badan oo loogu talagalay kuwa doorta miiska gnome 2 oo leh qurux aad u fiican
U jawaab Gabriel Andrade (@zurdo_utm)
Kusoo dhawow ozozo:
Ma tihid isticmaale caadi ah, waxaad tahay kaliya "isticmaale fudud", nooca isticmaalaha waxaan ula jeedaa markaan dhaho Gnome Shell ma ahan mid caqli gal ah ama la isticmaali karo gabi ahaanba. Waxaan kula wadaagayaa fikraddan:
Midnimada ama Gnome Shell waxay fikrad fiican u noqon kartaa taleefanka gacanta, laakiin isticmaalaha caadiga ah gebi ahaanba waa kuwo aan la isticmaali karin oo aad u adag. Goorma ayey barnaamijyayaashu fahmayaan?
Weli Midnimada ma badna, laakiin Qolofta Gnome.. buufis
Qoraagu wuxuu leeyahay qaab uu wax uga qoro waxyaalo uusan jeclayn, waana karaahiyo
Oh Michel, haddii aad ogaan lahayd waxa aan ka fikiro sida aad u muujiso naftaada Ubuntu... laakiin waxba, taasi waa sidaan nahay, waxaad u maleyneysaa inaad tihiin, waxaan u maleynayaa tayda.
Gnome 3-ka guud ahaan waa wax laga yaqyaqsoodo, macquul maahan in si loo isticmaali karo waa inaad ku dartaa kordhin iyo kuwan markii ay rabaan inay fashilmaan, ka sokow taasi waa madax xanuun in la siiyo shakhsiyad gaar ah, sidoo kale maadaama aysan noqon doonin Waxaa laga yaabaa inaanan dhexgalin aaladaha gnome tweak mar iyo dhamaanba, nimankani waxay dulmareen layaabka, kaas oo noqon kara una muuqda mid fudud, laakiin waxay ka saareen sifooyin badan oo seegay. Waxaan la joogayaa KDE iyo XFCE
Ku jawaab luis jiménez
Wax kasta oo qoraalku muujinayo waa run
Waxaan dilayaa xoojinta doodaada, waan yaabay
Waxaan u maleynayaa in Elav uu ku saxan yahay qaar ka mid ah waxyaabaha uu ku dhaliilayo, dulucda iyo muuqaalada ayaa ah wax laga naxo, dulucda astaanta ayaa ah mid aad u foolxun, oo markii la cusbooneysiiyo waxaa la dareemayaa gabow, Adwaita-na ma qurux badna Waan ku raacsanahay isaga, mana aha aniga oo keliya, laakiin dad badan oo isticmaala Gnome 3 oo u maleynaya inay isku mid yihiin, waxaan u maleynayaa inay mudnaanta siinayaan midabada madow, sida cawl madow oo ku jira codsiyada sawirrada.
Waxa aanan ku raacsaneyn wax badan waa Totem, waan ixtiraamayaa fikradaada, laakiin aniga ahaan ma ahan wax laga naxo, Totem si fiican ayuu u shaqeeyaa, waa mid xasiloon oo aan wax badan cunin, isdhexgalkiisuna waa mid fudud.
Gabagabadii, waxaan u maleynayaa in si loo noqdo Gnome 3.5.x ay tahay inay xalliyaan hal mar iyo dhammaan dhibaatooyinka soo jiitamayay tan iyo markii Gnome 3 uu jiro, sida muuqaalka muuqaalka Gnome, iyo sidoo kale xulashooyin dheeri ah (ma weydiisanayo inay isku daraan Qalabka Gnome Tweak, laakiin haddii ay hagaajiyaan kordhinta oo ay ku daraan ikhtiyaarrada barnaamijkan asal ahaan) Waxaan u maleynayaa in haddii ay tahay jawi aad loo isticmaali karo oo ku saabsan PC, waa arrin la qabsiga isbeddelada, in sabirka xitaa ay qurux badnaan karto, iyo inay wali leedahay waddo dheer oo loo socdo, salaan
Ku jawaab ergeo
Soo dhaweyn ergean:
Tan waxaad ka faallooneysaa:
Waana ku faraxsanahay inaadan igu raacsaneyn, maxaa yeelay taasi waxay muujineysaa inaan nahay bini aadam mana ahan inaan u fikirno si isku mid ah. Dhibaatadayda Totem waa mid halyeey ah, had iyo jeer waxay i siisay dhibaatooyin noocyada feylasha qaar ama subtitles. Waa run in isdhexgalka uu yahay mid aad u fudud, waxaan dhihi lahaa xitaa qurux badan, laakiin wali waxaan door bidaa ciyaartoy ka awood badan sida Gnome-mplayer, VLC ama xitaa Parole.
Gabagabadii, waxaan u maleynayaa in si ay u noqdaan Gnome 3.5.x ay tahay inay xalliyaan hal mar iyo dhammaan dhibaatooyinka soo jiitamayay tan iyo markii Gnome 3 uu jiro, sida muuqaalka muuqaalka Gnome, iyo sidoo kale xulashooyin dheeri ah (ma weydiisanayo inay isku daraan Gnome Tweak Tool, laakiin haddii ay hagaajiyaan kordhinta oo ay ku daraan xulashooyinka barnaamijkan asal ahaan).
Waa isku mid sidaan filayo. Waa inay sifududeeyaan sawirka xoogaa.
Waxaan isku dayay qolofta Gnome ee ku jirta Opensuse, Fedora, Ubuntu, baaritaanka Debian iyo Ubuntu Gnome Shell remix, sidoo kale waxaan isku dayay Linux Mint iyo Mageia, hada waxaan wax ka qoraa Debian oo leh Kde (laga bilaabo rakibaada ugu yar) waana sii wadi doonaa ilaa Ha u ogolaato kooxda Gnome inay si dhab ah ula socdaan. Qalabka 'Gnome-Tweak-Tools' waa lama huraan inuu heer ku yimid, wuxuu si weyn u fududeyn lahaa qeyb ka mid ah qaabeynta qolofka, ma ahan in laga jaro, waa in lagu daro, waan ku raacsanahay Elav.
Anigu waxaan ahaa isticmaale gnome muddo sanado ah kde waan sii wadi doonaa, waxaan u maleynayaa, illaa Gnome shell 4, halkaas oo aan markale isku dayi doono. Salaan.
Ku jawaab mc5
Run ahaantii Gnome 3 runtii waa wax fool xun waa inay diiradda saaraan bilicsanaanta sidoo kale iyagoo wata mowduuc wanaagsan, astaamo tan kuwii ay u muuqdeen kuwo aad u gabowday, wax casri ah oo si dhib yar LOOGA HELO !!
Mawduucaas xun ee Gnome 3 Shell oo leh xadka daaqadaas foosha xun iyo badhanka u dhow, lama cafin karo ¬__¬
Waxaan hada rakibey si aan u tijaabiyo Debian Gnome Shell 3.4.2 oo waxaan ugu talagay Farshaxanka SolusOS 2. Isbadalku waa mid cajiib ah 😉 http://deblinux.wordpress.com/2012/06/25/como-instalar-el-artwork-de-solusos-2-en-debian-testing-wheezy-gnome-3-4/
Isticmaal ku hungoobay dijo
Waxaan booqde ku ahaa balooggan muddo gaaban mana aanan la kulmin wax badan oo "shaqsiyadeed" "ra'yi" ah oo ka dhan ah wax xaqiiqda fudud ee ah inaadan jeclayn sawirka, isla dood ku saabsan Gimp 2.8 xaqiiqda ah inaysan fiicnayn ama in aysan u ekaan "quruxda" ka jirta adduunka ee dalabyada lahaanshaha waxaa lagu qiimeeyaa ujeeddo aad u hooseysa (ma dhahayo in wax walba oo adduunka xorta ah ay wanaagsan yihiin, laakiin waa inaad bixisaa wanaag, ee aan ahayn dhaliil shakhsiyadeed).
Anigu waxaan ka mid ahay kuwa u maleynaya in Gnome 3 uusan u muuqan wax fiican ama "la isticmaali karo" xilligan laakiin halkaas laga bilaabo in la siiyo qiimeynnada noocaas ah ee aad u hooseeya ayaa aad u badan, qodobkan oo dhan wuxuu galayaa qosol ka mid ah shakhsiga maaddaama uusan jeclayn deegaanka la sheegay inuu ku weerarayo Xaqiraadda "anshax" taas oo fool xun haa laakiin halkaa laga soo gaadho tan waa mid aad u badan, niyad jab saafiya oo aan ka helayay boggan oo aan aad ugu ixtiraamayay mawduucyadeeda ku xeel dheeraa ujeedo ahaan adeegsade dhexdhexaad ah. laakiin haddii mawduucyadan ay sii socdaan, waxaan u saadaalinayaa mustaqbal xumo isaga.
Waxaan rajaynayaa inay bixiyaan sababaha sababahooda "u qalma mudnaanta" isla markaana abuuraan jahooyin cusub ka hor intaan la qorin maqaallada ku liita ujeeddada iyo sababta looga doodayo.
Jawaab Isticmaalaha Niyad jabsan
Waa wax layaableh sida qof kasta oo aniga igu khilaafay, oo iigu nuuxnuuxsaday inaanan ahayn ujeedo, ama uusan wax faallo ah ka bixin wax kasta oo caddaynaya "si run ah" inaan qaldanahay. Sida muuqata dad badan ayaa ilaaway waxa uu yahay balooggu. Tani maahan goob ay tahay inaan ka farxiyo isticmaale kasta oo gala, waa goob aan ku daabaco waxa aan u maleynayo, waxa aan aaminsanahay, waana ixtiraamayaa fekerka inta kale ha la wadaagaan ra'yigayga iyo haddii kale muujinta iyo faallooyinka oo dhan waa la oggolaaday).
Waxaan booqde ku ahaa balooggan muddo gaaban mana aanan la kulmin wax badan oo “shaqsiyadeed” “ra’yi” ah oo ka dhan ah wax xaqiiqda fudud ee ah inuusan jeclayn sawirka, isla dood ku saabsan Gimp 2.8 xaqiiqda ah inaysan u muuqan wax wanaagsan ama in aysan u ekaan "quruxda" ka jirta adduunka ee dalabyada lahaanshaha waxaa lagu qiimeeyaa ujeedo sidaa u yar (ma dhahayo in wax walba oo adduunka xorta ah ay wanaagsan yihiin, laakiin waa inaad bixisaa wanaag, ee aan ahayn dhaliil shakhsiyadeed).
Sidaad u tidhi, halkan ayaad ku cusub tahay. Haddii aad aqrisay faallooyin kale ama maqaalo aan ka sameeyay Qolofta Gnome, waad fahmi laheyd inaanan kaliya u hadleynin sawirka (in haddii ay u baahan tahay si dhakhso leh loo cusbooneysiiyo). Waxaan si fiican u tijaabiyey Gnome Shell sidii inaan si macquul ah u idhaahdo, aniga aniga ahaan, lama heli karo, mana qurux badna. Hadda waxaa ii soo baxday in aanan sheegi karin waxa aan u maleynayo? Waxaa laga yaabaa inaadan sidaa u niyad jabinayn haddii aan si ka duwan sidii hore aan ugu wajihi lahaa maqaalka, laakiin wixii aan qoray, waxay ahaayeen wixii aan markaas ku fikiray.
Anigu waxaan qabaa in Gnome 3 uusan u muuqan wax fiican ama "la isticmaali karo" waqtigan laakiin halkaas laga bilaabo in la siiyo qiimeynnada noocaas ah ee aad u hooseeya ayaa aad u badan, maqaalkan oo dhan wuxuu galayaa wax lagu qoslo sida ay tahay ma jecla deegaanka la yiri wuxuu ku weeraraa Xaqiraadda "anshax" taas oo fool xun haa laakiin halkaa laga soo gaadho tan waa mid aad u badan, niyad jab saafiya oo aan ka helay boggan oo aan aad ugu ixtiraamayay mawduucyadeeda ku xeel dheeraa ujeedo ahaan adeegsade dhexdhexaad ah. laakiin haddii mawduucyadan ay sii socdaan, waxaan u saadaalinayaa mustaqbal xumo isaga.
Ma ii sheegi kartaa qaar ka mid ah qiimeyntan shaqsiyan sida aad u hooseyso By the way, waxaad kaloo i soo xigataa meesha aan ku weerarayo xaqiraad "moral" ah oo hadaan qaldanahay, i rumee, waxaan noqon doonaa qofka ugu horeeya ee saxaya. By the way, haddii aad sidaas u fiican tahay, miyaad na siisaa xoogaa tilmaamo ah si aan u hubinno in balooggu uusan lahayn mustaqbal sidan u xun?
«Fiiriya» «qurux» «aqoonsi» «qosol» «xasilloon»
Waana inaad barataa inaad wax qorto kahor intaanad faallo ka bixin balooggan
Iyadoo aan loo baahnayn 😉
arrintu waxay umuuqataa mid asal ahaan ka soojeeda wax kasta oo kale. isku mid, dhaleecayn aan aasaas lahayn.
Waxaan u arkaa inay lamid tahay gnome-ga koowaad 3.
Aniguna waxaan moodayay inaan kaligey ahay ... 😀
Waa fikrad ka baxsan su'aasha, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ku arko balooggan maqaallo yar oo dheeri ah oo la xiriira isticmaalka GNU / Linux; Faallooyin hore aan horey u idhi, waxaan u maleynayaa inay si aad ah diiradda u saaraan arrimaha muuqaalka iyo bilicsanaanta ee qaybinta oo aysan aad ugu mashquulin shaqada. Kaliya waa aragtidayda.
PS: Waxaan jeclaan lahaa maqaal ku saabsan Khamriga. Mararka qaarkood waxaa jira dad aan u wareegin GNU / Linux xaqiiqda fudud ee ah inay jiraan barnaamijyo kaliya leh rakibayaasha daaqadaha. Ka faa'iideyso xaqiiqda ah in Khamrigu ku jiro keydka Debian GNU / Linux (Sid iyo tijaabinta) qaabkeedii ugu dambeeyay ee xasilloon (Mahadsanid Michael Gilbert, Hilko Bengen, Stephen Kitt iyo kuwa kale); taasina waa distoorka aad isticmaasho.
Ha walwelin, waxaan maskaxda ku hayaa maqaallo dhowr ah oo la xiriira dejinta, codsiyada, iwm ... taasi waa, ma ahan wax badan oo muuqaal ah. Kaliya waqtiga iyo internet-ka iguma filna aniga xilligan inaan daabaco wax badan, ama ugu yaraan aan daabaco maqaallo qoto dheer.
Waan fahamsanahay aragtidaada faallooyinkaaga, waxaana aaminsanahay inaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan qoro waxyaabo farsamo oo dheeri ah, waxa dhacaya ayaa ah in boostada noocan oo kale ah mararka qaarkood ay qaadato cilmi baaris iyo wixii ka sareeya waqtiga oo dhan, wax aan xilligan ka maqanahay .. Laakiin ha ka welwelin , qodobbada noocaas ah ayaa had iyo jeer joogi doona halkan.
Hagaag, gnome 3keyga uma muuqdo wax aad u xun in la isticmaalo mana aha wax qarsoodi ah ama dhib badan, wax walbaa way jiraan, shaqsiyan waan la galay KDE wax badan, waan isticmaalay wax yar laakiin waan la qabsan kari waayey, waxaan u maleynayaa inay tahay waqti uun in lala qabsado qolof gnome
Haa, waad saxantahay, waxaan u maleynayaa in waxa Gnome 3 uu hada fashilmayo ay tahay dhanka muuqaalka, maahan in loo isticmaali karo jawi desktop ah.Waxay umuuqataa AAD LA isticmaali karo oo bedel weyn u ah desktops-yada kale. Waa arin meesha ka saareysa cabsida aan qabno. in la beddelo oo aan loo eexan.
Hagaag, sida faallooyin hore aan horeyba uga faallooday, "waxaan u weynahay biseyl in aan aqrino / dhagaysanno ra'yi anaga oo aan dareemaynin wax la weerarayo" faallooyinka elav "way ii muuqdaan aniga" taasi waa isaga, waxaan dhahayaa ma jecli kuwa kalena way dhagaystaan ​​waa wax aan faa'iido lahayn.
Maqaal wanaagsan, waan kugu raacsanahay waxaad kashifayso.
PS, ma jecli chayote (waxaan rajeynayaa ineysan iskutallaabta igu qodbin tan, iyagoo dhahaya waxaan weerarayaa khudraddan sharafta leh hahahahahaha)
Jidka elav, miyaadan sanad fasax qaadan doonin?
Waxay ahayd dhowr toddobaad, kii ugu horreeyay ee uu ka bilaabay shaqada cusub ... ma aysan sii socon 5 maalmood HAHAHA. Nasiib wanaag, maadaama Linux uusan aniga kaliya igu xirneyn, maxaa yeelay sida aad aragto, anigu ma ihi kan ugu daabaca badan, wax aad u yar ...
Hahaha ha yaraato ama ha yaraato, laakiin markaan la qabsado shaqada cusub, waqtigu waa iska dhacayaa Laga soo bilaabo Linux.
Waxaan si saraaxad leh uga niyad jabsanyahay isdhexgalka bilaashka ah ee hada socda. Waxay ila tahay aniga inay wax walba dib uga noqdeen. Gnome iyo KDE intee in le'eg Sidee ayey ugu adkaatay inaan casriyeeyo wixii aan horey u haysan jirnay Waan jeclaa KDE 2.x iyo 3.x, gnome-na ma xumeyn illaa nooca 2.16, ka dib way istaagtay ka dibna si fiican, tan waxay ugu yeeraan kacaan.
Waa iska cadahay in horumariyaasha KDE iyo Gnome ay xaq u leeyihiin inay sameeyaan wixii loo sheegay, laakiin taasi micnaheedu maahan inaan aaminaad ku qabo software-ka bilaashka ah ee desktop-ka. Dabcan, adeege ahaan wuu duulayaa.
Qolofka kaliya ee desktop-ka ah ee aan wali jecelahay waa 'Enlightenmente', oo aad u xun oo ka duwan Gnome uu leeyahay taageero ganacsi oo yar, iyo barnaamij aad u yar oo ku saleysan qaab-dhismeedkiisa.
KDE 2 ma ka fiican yahay KDE 4? GNOME ma xumeyn ... ilaa nooca 2.16?
Xaqiiqdii, waxaa jira dhadhammo badan sida ay leeyihiin midabbo.
Waa wax cajiib ah sida Gnome uu wax walba u tuuray, runtii waxaan u maleynayay in KDE 4 uu lahaa laadyo iyo suxuun badan laakiin waa mid shaqeynaya markasta oo ay ku guuleysato dhanka xasilloonida, dhanka kale Gnome isbadalku wuxuu ahaa mid aad uxun walina ma muujinayo wax astaamo ah in la habeeyo fudud sida had iyo jeer ahayd. Nasiib wanaag waxaa jira XFCE waxay daboolaysaa baahideyda waqti dheer kahor Gnome 3. Salaan.
Haddii aan oggolaado in xilligan ay tahay inay ahaato jawi aad u bisil oo desktop-ka ah oo aanan rumaysnayn inaysan horumarin maxaa yeelay way soo hagaagtay - laakiin haddii ay aniga ila tahay inay leedahay cillado badan oo dhinacyada qaarkood ah oo qofku u tixgelin doono aasaasiga sida dejinta, Tusaale ahaan arrinta fidinta ee si aan kala sooc lahayn u dhacday ama leh iswaafaqla'aan, taasi waa inay ka siifiican tahay. Laakiin sidoo kale aniga waxay ila tahay Elav inaad isku daydo inaad dhexdhexaad ka dhigto midabyada maqaalladaada markay tahay mowduucyo aadan ku raacsanayn maxaa yeelay inkasta oo ay fikrad yihiin (adiguna aad u caddeyso naftaada) waxaa lagu arki karaa iyagoo leh ereyo cay ah sida horayba u dhacday. waqtigaas oo ku qornaa maqaalka Xafiiska Furan.
Waan ku faraxsanahay inaan aqbalo dhaliishaada RayonantHagaag, waa runtaa in mararka qaar aan xoogaa ku bixiyo qaabka aan wax u qoro (waxay noqon doontaa maxaa yeelay waxay ka tarjumaysaa shakhsiyaddeyda xoogaa), in kastoo haddii aad ii oggolaato inaan is difaaco, waxaan u maleynayaa inaanan cidna uga xumaan qoraalkeyga, miyaan? 😕
Ninku kama maqnayn, cidna ha u gafin dabcan maahan, laakiin haddii uu abuuro wax aan fiicnayn oo ku saabsan fikradahaaga. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxay sidoo kale qeyb ka tahay khataraha ganacsiga.
Haa, nasiib daro, in kastoo aan si qurux badan u hadlo, haddana qof walba markasta igama aqbalayo 😀
Waa inaan idhaahdaa si adag ayaan u diidanahay qoraalkan, Gnome wuxuu joojiyay inuu noqdo desktop-ka caajiska iyo nuqul lahaanshaha inuu noqdo desktop-ka qarniga 21aad (cidina ma dhihi karto ma ahan kacaan), waa inaan aqoonsanno hal-abuurnimada ay ka sameysay fikradeeda desktop. Aynu nuqul ka sameysano gnome 3.0, 3.2 iyo 3.4 oo aan ku tijaabiyay sida desktop-ka ugu weyn, xasiloonida ayaa si qancisa u koraysa, mar dambe cabashooyin kama haysto shilalka iyo gaabiska, way ka dhaqso badan tahay midnimada (waan tijaabiyey oo isbarbar dhig la'aan)
Maxaa dhacaya haddii aan la keydin karin inay tahay inay leedahay ballaarin dibadeed oo aysan ahayn mid u gaar ah, gnome waa inuu qaataa kuwa ugu caansan oo uu siiyaa ikhtiyaarka uu ku dhaqaajiyo hadhow. KDE waxay noqon kartaa wax kasta oo qurux badan, oo leh kun shaqooyin iyo dhaqameed aad rabto, laakiin la shaqeynta waxay waqti ku lumineysaa xulashooyinka meel walba ku kala firirsan (feker ahaanteyda, marwalba waan arkaa inay qurux badan tahay laakiin si raaxo leh ayaan ula shaqeyn karaa, si ka duwan inta kale kombuyuutarrada Linux)
Waa hagaag, in kordhinta qaarkood ay fashilanto waa la fahmi karaa, boggu wuxuu leeyahay BETA, waxaa jira dad aan u muuqan inay garanayaan waxa eraygan macnihiisu yahay.
Ugu dambayntiina Elav, haddii aadan jeclayn Gnome, maxaad ugu noqon weyday XFCE oo aad u joojinaysaa taabashada ukunta? Iyada oo dhammaan ixtiraamka la mudan yahay, laakiin codkaagu wuxuu u qalmaa ereyo "adag". Mid ka mid ah waa in la dhiibto ra'yi mid kalena waa in la rumeysto Linus oo aan sidaas u sii dhicin.
Ku jawaab don-kmi
don-kmi, ugu horreyntii waxaad ku soo dhaweyneysaa baloogga. Ku saabsan faallooyinkaaga yaa yiri waan joojiyay isticmaalka Xfce? Iyo hadaan adeegsan jiray Gnome, ma noqon doono sida saxda ah Shell, laakiin GnomeClassic.
Maxaan u joojin waayey taabashada ukunta? Hagaag, maxaa yeelay kuwa kaliya ee dareema tilmaam qoraalkeyga ayaa ah kuwa sidaada oo kale ah (Pro Gnome-Shell) inaysan awoodin inay ixtiraamaan ra'yigayga. Intaas waxaa sii dheer, aniga ayaa xor u ah in aan muujiyo ra'yigayga si kasta oo aan doono waxaana ii muuqata in aanan cidna u gafin. Si aan u dhammeeyo, maahan inaan noqdo Linus Torvalds si aan uga hadlo xumaan wax aanan jeclayn, maxaa yeelay waan ku celceliyaa, kamaan xumayn qof la mid ah qoraalkayga.
Haye laakiin waa inaad si cad wax uga sheegtaa .. Taasi Gnome Shell ee ku taal Ubuntu waxay u dhaqantaa si aad u wanaagsan ..
Waan jeclaaday maqaalka, muylinux-ka waxaan u helay inaan ka faaloodo halkanna mar labaad ayaan faallo ka bixinayaa:
Gnome 3 lama barbar dhigi karo KDE. Ma isticmaalin KDE, laakiin waan aqriyay markii ay soo baxeen Unity iyo Gnome Shell. Haddii aanan khaldamin (iyo haddii aan khaldamo, i sax) dhibaatada ka jirta KDE 4 waxay ahayd inay ahayd mid aan degganayn, qaar badan ayaa ku tilmaamay "mid culus". Si kastaba ha noqotee, dhibaatada Gnome Shell waa shaqeynta, xasilloonida ayaa qumman, laakiin waa "raaxo la'aan" taasna laguma xallin karo waqti (horeyba way u lahaayeen).
KDE4 maalmihiisii ​​hore sidoo kale dhibaatooyin xagga shaqooyinka ah ayay qabeen. Si kale haddii loo dhigo, KDE3 waxay u oggolaatay waxyaabo badan oo ka badan KDE4 bilowgeeda, isticmaaleyaal badan ayaa dareemay inaanay faraxsanayn oo u beddelay Gnome…. aniga ka mid ah.
Maanta, KDE4 aad buu uga sarreeyaa KDE3 xagga xulashooyinka (uguyaraan waa sidaan u arko).
Maqaal xoogaa kooban laakiin waan ku raacsanahay waxa uu leeyahay: GNOME 3 / Shell wuxuu nuugaa naqshadeynta iyo shaqeynta ... haddii aad u degto maaddaama ay ka timid warshadda ama aad gacanta ku hayso wax walba. Kiiska ugu horeeya waxaa aqbali doona "inyar", laakiin guud ahaan dadweynaha oo aan kaftan gaarin. Ta labaad… Waa hagaag, malaha Linux Mint ayaa wax qaban doona.
Inkasta oo aysan wax xiriir ah la lahayn mowduuca, hadana kuma caawin karo laakiin inaan ku yara maaweello faallooyinka "akhristayaasha xanaaqsan" (si hoose u dhig), ka dib markaan cunay lol. Waxaan kaliya ugu hambalyeyn karaa elav maqaalkiisa ra'yi (waxaa jira dad aan wali fahmin fikradan), oo xusuusnow in gadaasha Windows, Mac OS X ama KDE ay sidoo kale jiraan naqshadeeyayaal xirfadlayaal ah, labadaba muuqaal ahaan iyo ficil ahaanba, taasi waxay doorteen wadooyin kale. Aan aragno haddii ay hadda soo baxday in naqshadayaasha GNOME ay leeyihiin runta buuxda.
Hagaag, waa tan mid kale oo ka soo cararay Gnome 3 (Shell iyo Unity) si uu u magan galo Xfce.
Aniga qaladkii ugu weynaa ee Gnome 3 (Shell iyo Unity) iyo Metro (ee Windows 8) aniga ayaa "ku qasbaya" adeegsadaha inuu adeegsado nidaam qalliin oo aan u maleynayo kaliya in loogu talagalay aaladaha taabashada.
Waqtiga ayaa sheegi doona waxa ku dhaca isbeddelada badan
Wax dan ah kama lihi bilicsanaanta ama dulucda qolofta gnome, meelaha plas plis ah waxaad uga tagaysaa qolofka agtiisa mawduuc kale. Waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo shaqeynta. Tusaale ahaan, si loo rakibo qolofta gnome ee ubuntu waa inaad tirtirtaa raad kasta oo midnimo iyo isugeyn (ikhtiyaar ah), ugu talagal ah inaad si toos ah u gasho qolofta gnome ee desktop-ka, ku dar gnome 3 launpad repository, tag bogga fidinta gnome qolof iyo intaa iyo in ka badan ...
Kaalay, u fududee, mid ka yimaada cherry dhanaan, iyaga iyaga waxaa u wanaagsan in la tijaabiyo Ubuntu Gnome Shell Remix oo keenaya 100% qolofta gnome ama Mint horeyba wax walba kuu siisay.
Ma aqaano in kooxda gnome ay ka sii fekerayeen kiniiniyada iyo wixii la mid ah, waxa aniga ii cad ayaa ah in kombuyuutarka uusan ahayn ikhtiyaarka ugu fiican, Gnome2 ayay ahayd.
Iyo sida qaabeynta qaababka baararka sare, maxaan dhihi doonaa iyo sida loo badalayo midabada mowduuca inbadan oo isku mid ah iyo sida loo badalayo astaamaha cabirka qolofka ee Codsiyada isku mid iwm, iwm. Haa, wax walba waxay leeyihiin xal, laakiin waxaa jira dad aan haysan waqti intaas le'eg oo qolofta gnome si sax ah saaxiibtinimo ugu ahayn sidii aan fileynay, hadda.
mc5, wax dhibaato ah kalamaan kulmin markii aan rakibayay Shell, isla xaruntii barnaamijka ee aan ku rakibay waxay u shaqeysaa sida adag ee Debian.
Sidoo kale rakibi KDE (kubuntu-desktop) LXDE (lubuntu-desktop) Xfce (xfce4) dhammaantoodna si fiican ayey iigu shaqeeyeen.
Qolofka 'Gnome shell' ma ahan cibaadadayda laakiin aniga ilama muuqato wax aad u xun. Waxay ila muuqan doontaa fikrad wanaagsan aniga, haddii aad bedesho mawduuca iyo astaamaha asalka ah. Waxay sidoo kale fiicnaan laheyd haddii aad soo dejisan karto waxyaabo dheeri ah iyo mawduucyo adoo adeegsanaya qaab kde-style ah. Ama xaqiiqdaas in ay fududeeyaan qaabeynta wax yar, maaddaama qof walbaa uusan isla shaqeynin, aniga ahaan qaabeynta kde iyo xfce marka loo eego waa kuwo aan raaxo lahayn tusaale ahaan, sidaa darteed waxaan u beddelaa sidaan jeclahay, tan ku samee gnome qolof inkasta oo aaney macquul ahayn, haddana way ka sii dhib badan tahay.
Dhadhan ahaan, midabbo ... Kaliya waxaan dhahayaa waan jeclahay Gnome. Aniguna wax walba waan isku dayay. Haddii qofka la tartamayaa uu yahay KDE, tallaabo…. oo eeg inaan fursado siiyay. Inta kale ee "iftiinka" bey'adduna waa dib-u-dhac cudur-daar leh oo leh cudurdaar shuruudaha ugu yar. Jira, dhammaan bay'adaha la dalbaday waa inay jiraan. Midka aan dalbanayana waa Gnome, inyar inyar…. dhaqaaq…. ma aha sida ugu dhakhsaha badan ee aan jeclaan lahayn, laakiin way sii socotaa oo had iyo jeer, ra'yigeyga, ayaa leh guulo.
Iyo Gnome Shell, sheeko isku mid ah. Horey ayaa loo ogaa in, ul qalalan, ay tahay deegaan lagu isticmaalo faraha iyo kiiboodhka, taas oo ah isbadalka dhamaan jawiyada jira. Yaanan iloobin in dad aad u tiro badani ay doorbidayaan wax la qaadan karo, ha ahaato kiniinno ama laptop-yo…. iyo qalabkaas taabashada ayaa dhawaan caan ka noqon doona desktop-ka. Sidaa darteed, waxa macquulka ahi waa in lagu shaqeeyo xariiqdan. Laakiin tan iyo markii "desktop-kii dhaqameed" uu weli xukumo… ma jiraan wax "laba kordhin" ah oo aan lagu xallin karin si loo gaaro jawi shaqeynaya oo wax soo saar leh.
Iyo sida astaamaha…. qaybinta ma fulineyso shaqadeeda oo ah qurux iyo astaamo ku filan. Goor dhow ama goor dambe ayaan ku dhammaaneynaa beddelka mawduuca iyo astaamaha. Gudaha Gnome aad ayey uga gaabinayaan astaamaha waxayna raacayaan xariiq ka mid ah, ixtiraamaya naqshadaha hore, iyaga u qaabeynaya, taas oo aan u maleynayo inay haboon tahay. In kasta oo ay adagtahay in kuwa maqan la siiyo astaamo isku qaab ah (run ahaan macquul ah). Gaar ahaan, marwalba waan istcimaalay isla astaamo, dib uheelinta markasta oo aan awoodo waxaana jeclahay inaan lahaado astaamo duug ah (laakiin tayada svg) naqshadaha casriga casriga ee Gnome Shell iyo hubinta hufnaan ay baakado yar oo sumad ah ku siinayaan hadaadan adigu sameyn. wax yar.
Waa hagaag, waa inaan idhaahdaa waan kugu raacsanahay, Gnome Shell waa 'fudud' laakiin kordhin la 'aanta kaliya ma shaqeynayso: / aafada guud.
Taasi waa waxa aad hesho…
Waxay haysaa oo keliya in la sugo
Aynu aragno ... aan aragno in aan u gudbinno dhowr xariiq oo koodh ah kuwa horumariya ... laga yaabee in ay sifiican kuu dhagaysan doonaan.
Maxaan inteenna ugu fikirnaa inaan wax uun ugu dareyno Isha Furan markaan qoreyno koodh lambar Mararka qaarkood "dhaleecaynta / soo jeedinta" sidoo kale way caawinaysaa.
maxaa yeelay hadday waxba soo kordhin waayaan, sidee bay sidaas u dalbanayaan?
Maxaa kaa dhigaya inaad u maleyneyso inaanan bixinayn (ama aan gacan ka geysto kiiskan) waxba toona Meel furan? Sidoo kale Fernando, macmiil kasta / adeegsade dabiici ahaan waa dalbanayaa, oo i aamin, ma ihi xaaladdii ugu xumeyd.
Miyaad aragtaa fiilada tusaysa distro iyo biraawsar faallooyin kasta?
Qalabkaan waxaa loo adeegsadaa kumanaan goobood iyo baloogyo adduunka ah, waxaan ku soo kordhinay inta u dhexeysa 20 ilaa 30 khad oo koodh ah kumbuyuutarkan, kumanaan qofna way ka faa'iideystaan ​​tan.
Tani waxay wax ku biirinaysaa sida ay fikraddaadu tahay, sax? 😉
Ha u qaadan lamaane dagaal, sida inbadan oo ka mid ahi u maleeyaan inay aad u fududahay qoritaanka maqaal iyo dhaliil aan sal lahayn, sidoo kale way fududahay in la hadlo adoon ogayn xaqiiqooyinka, sida kiiskan oo kale. Ogsoonow, in xaqiiqda kaliya ee ka caawinta dadka ku jira golaha, ama iyada oo loo marayo barta lafteeda, ay horayba u tahay caawimaad enoorrmeee loogu talagalay Software Bilaash ah. Mise taasi miyaanay tirin?
Waan ogahay, wax ku biirintu waa waxtar. Ama ku caawi wadahadal, goob fagaare ah, ku qorista maqaalada gole, koodh gacan, iwm.
Kaliya ... haddii aad rabto inaad ka hadasho koodhka, waxaan si farxad leh u bilaabi doonaa inaan qoro qoraallada, shaqooyinka, khadadka koodhka ee aannu qorsheynay oo aan ku riyaaqay dhammaanba all
In yar oo la buunbuuniyey oo aan doodo adagi ka soo bixin, ma samayn falanqayn, waxaad soo jeedisay dhaliil aan waxtar lahayn.
Xaqiiqda ah inaadan jeclayn gnome kuuma ogolaanayo inaad aragto wanaagiisa, inuu leeyahay iyo inbadan ... Ma ahan inaad isku xirto koox qaab sidaas ah, laakiin waa noloshaada, waa dookhaaga, waxaad xor u tahay inaad dhiibato aragtidaada waana ku faraxsanahay waa
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga Maqaalkeyga looma jeedin in lagu sameeyo Dib-u-eegista, maxaa yeelay Gnome Shell in badan ayaa laga hadlay, waxaan kaliya ugu talagay in aan tilmaamo in ay sii wadaan qaladaad isku mid ah aragtidayda.
Waxa aan ula jeeday waa inaadan arag hal wanaag, oo maxaad adiga qalad ugu tahay kuwa kale waa wanaag, laakiin haye, naftaada. 🙂
Horaan u idhi, laakiin markale ayaan ku celiyaa. Waxyaabaha wanaagsan ee aan u arko Gnome Shell waa:
- Nidaamka ogeysiinta oo ay suurtagal tahay in looga jawaabo xildhibaan <Waan jeclahay taas .. - Waxay u adeegsataa mowduucyada tiknoolajiyadda / barnaamijyada websaydhka. - Ku fiican qalabka taabashada. Bannaanka taas, ma heli karo wax kale.
Ma lihi aqoon sare oo ku saabsan Linux, ama sharraxaadda, ama lambarrada, waxa kaliya ee aan ogahay ayaa ah in balooggan uu iga qoslinayo wax badan (sidaan ku sheegay maqaal kale), iyadoo ay jiraan doodahaas, oo Mr. Elav uu had iyo jeer ku lug leeyahay.
Hehehe, markaa waxay dhihi doonaan OpenSource gudaheeda tirooyinka ugu murugsan waa:
Waxa aan uga fikirayo maqaalkaagu waa inaad ra'yi ka dhiibatay arrin (xaaladdan Gnome Shell) oo aad ku haysato dhammaan xorriyadda uu qof kasta oo aadam ahi yeelan karo, sidoo kale waa bartaada. Runtii dhibaato uma arko taas. Adiga kaliya ma tihid qofka sidaas u fikiraya, sidoo kale waxaan isku dayay Shell waana inaan kugu waafaqaa waxyaabaha kor ku xusan. Ma dafirayo inaanan jeclayn fikradda laakiin halkaa laga bilaabo inaan ku amaano oo aanan fiirin diidmada ay leedahay oo ah xagjirnimo badan. salaan
Wanaagsan! Waan jeclahay Blog-kan, waxaa maalin walba lagu cusbooneysiiyaa mowduucyo xiiso leh. Waanan fahansanahay inay jiraan macluumaad, tabo iyo fikrado galitaan. Sida milkiilayaasha baloogga, way fiicantahay in ay cabiraan ra'yigooda iyo wax aad u weyn oo ah in qadarinta cidda martidaadu had iyo jeer ku biireyso miiska. Tan had iyo jeer lama arko, waana ka yartahay xisaabinta.
Markaa wixii aan akhriyay waxaan u qaatay qiimeyn shakhsi ahaaneed oo Elav ah, oo aanan u arkin wax dagaal ku dhisan gabi ahaanba.
Gnome 3 waa fikrad wanaagsan. Waxaan ka tijaabiyey maalmihiisii ​​hore ArchLinux. Waxaan siiyay waqti badan iyo nuqul ka dib markii aan raadiyay kacaankii uu soo jeediyay. Ilaa aan si qarsoodi ah u isticmaali kari waayey buug yarahayga ku shaqeeya batteriga ee Gnome-Shell, oo aan ka dhicin meel kale. Waan kula wadaagayaa, miiska wuxuu leeyahay awood badan, waqtigaas oo aan laqabtay la shaqeynta oo ay ahayd mid wax soo saar badan leh. Laakiin waxay ku dhacdaa qodobo muhiimad gaar ah leh iyo shaqada farshaxanimada ayaa ka mid ah. Waxaa jira sooooo mowduucyo badan oo daaqadaha ah! Maxaa loo doortaa midkaas foosha xun. Isku dayga inaad wax bedeshona waxay keenaysaa uun dhibaato. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan nidaamyada Linux waa inaad wax walba u heli karto sidaad jeceshahay! Sidee loogu garnaqaa in nooca cusub ee kacaanka ee deegaanka muddada dheer dhisnaa uusan tixgelin siinin u qaabeynta? Xaq maaha.
Markaad isticmaaleyso Gnome waligey kama fikirin suurtagalnimada isticmaalka KDE. Calaamadaha ayaa cad, Gnome 3 ayaa ka tagay farqi weyn oo lagu muujiyey xulashooyinka cusub ee la soo bandhigay. Waxay ahayd inaan naftayda u haajiro haddana waxaan ku faraxsanahay KDE.
Salaan iyo mahadsanid booska !!!
Waad ku mahadsantahay faallooyinka Carlos, runtii. Waxaan inta badan ku dhegaa qaybtan:
Laakiin waxay ku dhacdaa qodobo aad muhiim u ah, shaqada farshaxannimaduna waa ka mid. Waxaa jira sooooo mowduucyo badan oo daaqadaha ah! Maxaa loo doortaa midkaas foosha xun. Isku dayga inaad wax bedeshona waxay keenaysaa uun dhibaato. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan nidaamyada Linux waa inaad wax walba u heli karto sidaad jeceshahay! Sidee loogu garnaqaa in nooca cusub ee kacaanka ee deegaanka muddada dheer dhisnaa uusan tixgelin siinin u qaabeynta? Xaq maaha.
Waad ku mahadsantahay sidaad u joojisay, noo aqrisay aadna noo siisay faallooyinka 😀
Aad baad u mahadsantahay 😉
Waxaan ku xasuusinayaa in gnome 2.X default uu sidoo kale ahaa mid quruxsan oo laga naxo
Ugu yaraan waxay ahayd mid aad loo habeyn karo.
Aad baan kuugu raacsanahay. Kahor Gnome Shell waxaan doorbidayaa Midnimada, laakiin raacida talaabooyinkaaga waxaan door bidaa Xfce… Waxaan xasuustaa inaan jeclahay bartaada internetka xfceando.wordpress.com 😀
Jawaab si elav.fan
Wixii Lex ah. 1.
Waa run in qolofta gnome laga rakibi karo xarunta softiweerka, laakiin habka aan ku sameeyo waa sida soo socota:
1- Dhamaadka rakibaadda, waxaan imanayaa desktop desktop, cusboonaysiin iyo dib u bilaabid.
2- Waxaan furayaa terminal-ka waxaana ku rakibaa karti iyo cusbooneysiin sudo aptitude update ah.
3- Hadda waxaan rakibaa xirmooyinka soo socda:
sudo karti ku rakib gnome-shell gnome-tweak-tool synaptic gdebi
4- Markaad rakibto, dib u bilow oo dooro meeriska galitaanka: Gnome.
5- Waxaan ku darayaa medibuntu iyo gnome3 keydadka laga soo bilaabo launpad (waa ikhtiyaari) oo waxaan ku shubanayaa synaptic.
6-Waxaan xiraa marinka 'synaptic' iyo terminal furan si aan u rakibo xirmada soo socota:
sudo karti u rakibida ubuntu-xaddidan-siyaado ah
7- Tag bogga fidinta qolofta gnome oo xulo.
8- Hadda waxaan kaliya u baahanahay inaan tirtirno midnimada, compiz, ubuntuone, shotwell iwm aad ...
Sidaad u aragto, mid kastaa wuxuu leeyahay nidaam u gaar ah, waxaan rajeynayaa in waxaas oo dhan laga samayn karo xarunta softiweerka ee Ubuntu, qaybna waa la samayn karaa, laakiin rakibidda kaliya qolofka ayaa kaaga tagi kara qolof aan dhammaystirnayn oo gnome ah.
Aragtidayda sida qof caadi ah oo aad u adeegsada shaqsiyadeed, ma jecli Gnome Shell, intii aan isku dayay, waxaan u isticmaalay in ka badan bil mana i qanciso, Midnimadu way ka fiican tahay xagga isticmaalka, ugu yaraan aniga ahaan. Waxaan ku rakibay Ubuntu 12.04 laptop-kayga oo waxaan aad ugu habeeyay kordhin, mawduucyo iyo baakad icon laakiin waxaan isku dayay SolusOS 1.1 waanan ku qancay, si aad u badan markiiba waan furey Ubuntu 12.04 oo markaan runta u hadlo ma doonayo inaan ka saaro, waan sii joogi doonaa waqti dheer, maxaa yeelay, jawaabtaydu way fududahay, Gnome 2 waa mid aad loo habeyn karo, Ma ahan Gnome 3, waa inaad ku rakibtaa Qalabka 'Gnome Tweak Tool' iyo tiro aan dhammaad lahayn oo kordhin si aad awood ugu yeelatid. Gnome 2 wuxuu leeyahay waxqabadyo badan oo badan oo uusan Gnome 3 ilaa iyo hadda bixin, taas oo ugu yaraan aniga ahaan, in 4 sano kahor aan u wareegay GNU / Linux sababta oo ah waxaan kufashilmi karaa nidaamka oo aan u habeyn karaa sida aan jeclahay, taas oo leh Gnome 3 sidaas maahan, waxaan u maleynayaa Windows-ka aad u baahan tahay inaad dhigato TuneUp Utilities qeyb ahaan u qaabeeyaan, marka la soo koobo tani waa fekerkeyga hooseeya.
Qofna wax badan uma sameeyo ragga ka socda Redmond sida abuurayaasha Gnome3, Bill, way ku faani doonaan oo ku qanacsan yihiin.
Ka jawaab Diode
OpenSUSE oo ku hoos jira mikroskoob
Miiskeyga maanta [Tijaabada Debian + Xfce 4.10 + Greybird_Zuki + Faenza_Elementary]